Print Page - အမောပြေဟာသမှတ်စု ( ၂ )
စာပေဌာန => သရော်၊ဟာသ၊ကလိတိတိ => လိင်စာပေမဟုတ်သော ဝတ္ထု ဆောင်းပါးနှင့် ကဗျာ ကဏ္ဍ => ဟာသ၊ ဥာဏ်စမ်း => Topic started by: ရွာဆော်ကြီး on March 16, 2013, 08:26:08 AM
Title: အမောပြေဟာသမှတ်စု ( ၂ )
Post by: ရွာဆော်ကြီး on March 16, 2013, 08:26:08 AM
ကွန်မန်ဒို နှစ်ယောက်သည် ထောက်လှမ်းရေးတာဝန်ဖြင့် ရန်သူရှိရာ စခန်းသို့
" ဟာာာာာ.....သွားပါပီကွာ...ငါ့လက်နှစ်ဘက်စလုံး ချေးပုံတက်ဖိမိတယ် ဒုက္ခပါပဲ "
ကျန်တစ်ယောက်က ကြား သောအခါ အားရပါးရ ထရီလေသည်။
" ရှူးးးးး......မင်းအသံကို ရန်သူတွေ ကြားကုန်လိမ့်မယ်... " ဟုဆိုကာ
ဟိုတစ်ယောက်၏ ပါးစပ်ကိုလက်ဖြင့် လှမ်းပိတ်လိုက်လေသည်။
Title: Re: အမောပြေဟာသမှတ်စု ( ၂ )
Post by: ရွာဆော်ကြီး on March 21, 2013, 08:25:26 AM
လက်ထပ်ပီး ရက်အနဲငယ်အကြာတွင် မြမြ က သူ့အမေထံသို့ ဖုန်းဆက်လေ၏။
" မြန်မာပြည်မှာ သတင်း သမားနဲ့ ဘယ်တော့မှ လက်မထပ်သင့်ဖူး ။ သမီးမှားပီ အမေ။"
" ဘာဖြစ်ပြန်တာလဲသမီးရယ်။ညည်းယောက်ျား အောင်မိုး ဟာ အင်မတန်တော်တဲ့ သူငယ်ပဲ။ပီးတော့ အလုပ်တခုကိုပဲ စိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်လား။
ရခိုင်အရေး။အကျဉ်းသားလွတ်မြောက်ရေး။မြစ်ဆုံ။OIC....။ခုလက်ပံတောင်းတွေ ဆန္ဒ ပြတာအလယ် ။နောက်ဆုံးမိတ်ထီလာတောင်ခုသွားနေရတာအေ။
သက်စွန့်စံဖြား သတင်းလိုက်တာတောင်အေ။ ဒါကို ဘာကြောင့်များလဲ သမီးရယ် "
မြမြ က လည်းပြန်ပြော၏။
" ဒါကတော့ ဟုတ်ပါတယ် အမေ ..ဒါပေမဲ့ သမီး သူ့ဆီကို ရေးခဲ့တဲ့ ရည်းစားစာတွေကို
သူ့ သတင်းဂျာနယ်တွေနဲ့ စာဆောင်တွေမှာ သတင်းမရတဲ့နေ့တွေဆို ဖော်ပြတယ်ရှင့် "
" ဟဲ့ ဒါစိတ်ဆိုးစရာမှ မဟုတ်ပဲ၊ ဂုဏ်တောင် ယူရအုန်းမယ်ဟဲ့....."
" ရယ်စရာ ဟာသ ကဏ္ဍ မှာ သူက ဖော်ပြတာ အမေရဲ့ အီးဟီး...."......တဲ့
Post by: ရွာဆော်ကြီး on March 21, 2013, 08:26:12 AM
သူငယ်ချင်း နှစ်ဦးသည် အိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းတွင်ထိုင်ကာ အရက်ပုလင်းထောင်ပီး သောက်နေကြ၏။
ထိုအချိန်တွင် အိမ်ရှင် သူငယ်ချင်း၏ မိန်းမ အပြင်မှပြန်ရောက်လာ၏။
အရက်ပုလင်းကိုမြင်သောအခါ စီးထားသော ဖိနပ် တစ်ဘက်ကိုချွတ်၍ ပစ်လိုက်၏။
ယောက်ကျားဖြစ်သူက နောက်တစ်ပုလင်းကို စားပွဲပေါ်သို့တင်လိုက်၏။
မိန်းမ ကလည်း ကျန် ဖိနပ် တဘက်ဖြင့် ပုလင်းကို ချိန်ပီး ပစ်ထဲ့လိုက်ပြန်၏။
ထိုအခါ ယောက်ကျားလုပ်သူသည် တတိယ အ၇က်ပုလင်းကို ထပ်မံထုတ်ကိုင်၍
တဆက်တည်း သူ၏ သူငယ်ချင်းအား ပြောလိုက်ပုံမှာ......
" ဒီတစ်ခါတော့ အေးအေးဆေးဆေး သောက်လို့ရပီ။သူ့ဆီမှာ ဖိနပ် မကျန်တော့ဖူးကွ..."......တဲ့
Post by: ရွာဆော်ကြီး on March 26, 2013, 10:15:44 PM
ရန်ကုန် မန္တလေး အမြန်ရထားပေါ်မှာ တောသားအဘိုးကြီးတစ်ဦး နဲ့ ခေတ်လူငယ်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်သူတို့ ဟာ
ခုံတစ်ခုမှာ အတူတူခရီးသွားဖြစ်ကြတယ် ။ ဘူတာ သုံးလေး ခုလောက်ကြတော့ ခရီးသွားမိတ်ဆွေတွေဖြစ်သွားကြတယ်။
ကောင်လေးက သူ့မှာဗဟုသုတ အများကြီးရှိကြောင်းသိပ်ကြွားချင်တယ်။ အဘိုးကြီးက တောသူဌေးမှန်းလဲသိထားတယ်။
ဒီတော့ သူလဲကြွားပြီးသားလဲဖြစ် အဘိုးကြီးဆီကငွေလဲရပြီးသားဖြစ်အောင်အကြံတစ်ခုထုတ်သတဲ့---
``အဘ -ရထားက အကြာကြီး စီးရဦးမှာဆိုတော့ ပျင်းဘို့ကောင်းတယ် - အဘနဲ့ ကျွန်တော် ဗဟုသုတမေးခွန်းလေးတွေမေးရအောင် --
ပိုပြီးလေးလေးနက်နက်ဖြစ်သွားအောင် ----မဖြေနိုင်တဲ့သူက တစ်ထောင်ပေးကြေး``
``မလုပ်ပါနဲ့ ငါ့တူရယ်-- အဘက ဗဟုသုတ မရှိပါဘူး``
``ဟာ-- အဘကလဲ --ကျွန်တော့ထက်အသက်အများကြီး ကြီးတာ--ပိုသိမှာပါ--ဒီလိုလုပ် အဘမဖြေနိုင်ရင် တစ်ထောင် ပေး၊
`` ----------------------- တစ်ထောင် --သုံးထောင်ဗျာ ``
`` မလုပ်ပါနဲ့ -------------``
``------------------------ တစ်ထောင် -- လေးထောင်ဗျာ``
ထောင် -- ငါထောင်ဗျာ``
`` ကဲ အဘရာ-- အဘမဖြေနှိင်ရင်တစ်ထောင်ပေး -ကျွန်တော်မဖြေနိုင်ရင် အဘကိုတစ်သောင်းပေးမယ်``
``ကဲ -- မင်းဒီလောက်တောင် အာသီသပြင်းနေမှတော့ မေးကွာ``
လူငယ်လဲ တော်တော်ပျော်သွားတယ်-- သူမေးတာအားလုံးအဘိုးကြီးမဖြေနိုင်ဘဲ -
``အခုသုံးနေတဲ့ လျှက်စစ်မီးကို ဘယ်သူစတီထွင်ခဲ့တာလဲ အဘ``
``အဘ မသိဘူး ----- ရော့ -အင့် တစ်ထောင် ``
``အယ်ဒီဆင် ဆိုတဲ့ဗြိတိသျှ လူမျိုးတစ်ဦးပေါ့ အဘရဲ့ ဟား ဟား ဟား ဟား ``
``ကဲ အဘမေးမယ့်အလှည့်`` လို့ လူငယ်ကစပ်ဖြီးဖြီး နဲ့ အလှည့်ပေးတယ်--
``အကောင်တစ်ကောင်ဟာ သစ်ပင်ပေါ်တတ်သွားတယ် -- တတ်တုံးကတော့ ချေလေးချောင်းပါတယ်--
ပြန်ဆင်းလာတော့ချေရှစ်ချောင်းဖြစ်သွားတယ် -- အဲဒါဘာအကောင်လဲ``
လူငယ်ဟာ ခေါင်းကုတ်ပြီးစဉ်းစားတယ်-- မေးပွတ်ပြီးစဉ်းစားတယ်--ချွေးပြန်အောင် ဘယ်လိုမှကိုစဉ်းစားမရတော့ တဲ့အဆုံး---
``ထူးဆန်းတယ် အဘရယ် -- ကျွန်တော်လည်း ဘယ်လိုမှစဉ်းစားလို့မရဘူး``
``စဉ်းစားလို့မရ ရင် တစ်သောင်းပေး``
လူငယ်ဟာ --ဖင်ကုတ်ခေါင်းကုတ် လုပ်ပြီး ငွေတစ်သောင်းပေးလိုက်ရတယ်--ပြီးမှ
``အဲဒါ ဘာကောင်လဲဟင် အဘ ``
`` အဘလဲ မသိဘူး ရော့ အင့် တစ်ထောင် ``
Post by: ရွာဆော်ကြီး on March 27, 2013, 07:34:57 AM
မူလရှိနှင့်ပီးသား ကြက်ဖအို က ၄င်း အား ဤသို့ စိန်ခေါ်၏။
" ဒီကြက်ခြံကို မင်းနဲ့ ငါ ၃ ပတ်အပြေးပြိုင်ပြေးမယ် အရင်ရောက်တဲ့သူ က ခြံထဲက ကြက်မတွေ အကုန် ယူကြေး.." ....လို့ဆို၏။
" စိန်လိုက် " ဟုပြောလေ၏။
သို့ဖြင့် ကြက်ဖအို နှင့်ကြက်ဖပျိုတို့ပြိုင်ပြေးကြ၏။ကြက်ဖပျိုကား လျင်မြန်စွာဖြင့် တစ်ပတ်ပြည့်သွား၏။
ထို့နောက် တစ်ပတ်အသာဖြင့် ကြက်ဖအိုနောက်မှလိုက်ကာ ကြက်ဖပျိုမှ ပြေးနေ၏။
ဤ သည်ကိုမြင်သော ကြက်ခြံပိုင်ရှင်က လေးခွကိုယူကာ ကြက်ပျိုကို ပစ်ချလိုက်၏။
" ကြက်ဖ၀ယ်တာ ၆ ကောင်ရှိပီ ၊အားလုံး လိင် တူကိုမှ ကြိုက်တဲ့ အကောင်တွေချည်းပဲ...." ...တဲ့
Post by: ရွာဆော်ကြီး on March 27, 2013, 07:35:45 AM
လူငယ်တစ်ယောက်သည် ပိုက်ဆံပြတ်သဖြင့် ရုပ်ဖျက်ပီး တောင်းစားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
ဟောင်းနွမ်း စုတ်ပြတ်သော အ၀တ်အစားကိုဝတ်ကာ ရန်ကုန်ဘူတာကြီးသို့သွား၏။
အားလုံးမြင်သာသည့်နေရာတွင် ထိုင်ပီး ဦးထုပ်ကို ပက်လက်အနေအထားဖြင့် ရှေ့တွင်ချကာ စ တောင်းရန်ပြင်၏။
ထိုစဉ် ခပ်လှမ်းလှမ်း မှ အမျိုးသမီးငယ် တယောက်လျှောက်လာသည်ကိုမြင်သည်။
ဈေးဦးပေါက်တော့ မည်ဟု တွေးကာ အားတက်သွား၏။
သို့သော်.....အနားရောက်တော့မှ မိမိချစ်သူ ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရရာ ခြေဖျားလက်ဖျားများအေးစက်ကုန်၏။
အမျိုးသမီး သည် လူငယ်၏ ရှေ့တွင်သေချာလာရပ်ပီး ၄င်း၏မျက်နှာကိုသေသေချာချာစိုက်ကြည့်သည်။
ထို့နောက် အံသြသံဖြင့်..."..ရှင့်ကြည့်ရတာ ကျမချစ်သူနဲ့ အရမ်းတူတာပဲ။တူ တာမှ ချွတ်စွတ်ပါပဲရှင်..."
အသံကိုထိမ်းပီး လူငယ်မှ ပြန်ပြောသည်။
" ခင်ဗျား လူမှားလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် "
" ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်......သေချာအောင် သူ အိမ်မှာ ရှိမရှိ သွားကြည့်လိုက်ပါဦးမယ် "
အမျိုးသမီးထွက်သွားသည်နှင့် လူငယ်သည် အရင်ဦးအောင် အိမ်သို့ပြေးသည်။
ရောက်ရောက်ချင်း ကမန်းကတန်း ရေချိုးကာ အ၀တ်အစားလဲ၏။
လူငယ် ကိုတွေ့သောအခါ သံသယ ရှိသော အသံဖြင့် လှမ်းပြောလိုက်သည်။
" မောင်နဲ့ အင်မတန်တူတဲ့ သူတောင်း စား တစ်ယောက်ကို ဘူတာကြီးမှာ အခုပဲတွေ့ခဲ့ရတယ် "
" လူမှားတာပါလို့ မင်းကို မောင်ပြောပီးပီးလေ...." ....တဲ့...
Post by: ရွာဆော်ကြီး on March 27, 2013, 07:36:47 AM
ဆေးရုံ တစ်ရုံတွင် မီးလောင်နေသည်။
ဆရာဝန်ကြီးလဲ ရုတ်တရက် ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေ၏။
ထိုစဉ် မီးသတ်သမားများရောက်လာလေသည်။မကြာခင်ပဲ မီးသတ်ခေါင်းဆောင်မှ......
" ဟူးးးးး....စိတ်အေးရပါပီ။လောင်တဲ့ အဆောင် က လူနာ - ၁၂ ယောက် ... မီးလွတ်ရာကို အမြန်မရွှေ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ...မီးဟပ်ခံရတဲ့ လူနာ ၈ - ယောက်ကိုတော့ ....အခု....သတိပြန်ရအောင် ကျနော်တို့ လုပ်ပေးနေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ လူနာ ၂ - ယောက်ကတော့ မီး ထဲ ပါသွားပါတယ်။ "
ဤ စကားကို ကြားရသောအခါ ဆရာဝန်ကြီးမှာ သတိလစ် မေ့လဲကျသွားလေသည်။
မီးသတ်သမား များက ဆရာဝန်ကိုနှာနှပ်ပီး သတိပြန်ရအောင် လုပ်ကြရ၏။
သတိရလာသော အခါ မီးသတ်သမားများက ဆရာဝန်ကြီး ကို မေး၏။
" ဒေါက်တာကြီး၊ ဘာဖြစ်သွားတာလဲဗျ "
" လောင်တဲ့ အဆောင်က လူနာဆောင် မဟုတ်ဖူး၊ရေခဲတိုက်ဗျ။...."....တဲ့
Post by: ရွာဆော်ကြီး on March 27, 2013, 07:41:08 AM
” မင်းလက်ရေးညံ့လိုက်တာကွာ၊ မင်းကိုနေ့တိုင်းရိုက်ရတာလည်း လက်ညောင်းလှပြီ၊
” ကျွန်တော့်မေမေကပြောတယ်ဆရာ၊ ငါ့သားလက်ရေးမလှလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးတဲ့၊
Post by: ရွာဆော်ကြီး on March 27, 2013, 07:42:38 AM
ခွဲစိတ်ခန်း တစ်ခုရှေ့တွင် လူနာတစ်ဦးနဲ့ ပတ်သက်ပီး ခွဲစိတ်ဆရာဝန် နှစ်ဦး အငြင်းပွားနေ၏။
ပထမဆရာဝန်။ ။သူ့အခြေအနေကိုကြည့်ရတာ ဘာမှ အားရစရာမရှိဖူး၊ကျနော့်အထင်တော့ သူ့ရဲ့ ဘယ်ခြေကို ကျိန်းသေဖြတ်ရမယ်ထင်တယ်။
ဒုတိယဆရာဝန်။ ။ကျနော့်အမြင်ကတော့ ခြေ နှစ် ဘက်လုံးကိုဖြတ်ရမယ်။
ဒုတိယဆရာဝန်။ ။မဟုတ်ဖူး။လုံးဝမှားတယ်။နှစ်ဘက်လုံး ကိုဖြတ်သင့်တာထင်တယ်။
ပထမဆရာဝန်။ ။အင်း။ ကျနော်ထင်တာက တဘက်ထည်းဗျ။
ဒုတိယဆရာဝန်။ ။ခင်ဗျားကလဲဗျာ။ကျုပ်က နှစ် ဘက်ထင်ပါတယ်ဆို။နှစ်ဘက်လုံးဗျ နှစ်ဘက်လုံး။
ထိုအခါ မိမိစိတ်ကိုထိန်းကာ ပထမဆရာဝန်က ပြောလိုက်သည်။
ပထမဆရာဝန်။ ။ကောင်းပြီလေ။ခင်ဗျားပြောတဲ့ အတိုင်းကျုပ်တို့ ဖြတ်လိုက်မယ်။
ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့ ကျုပ်တို့ နှစ်ယောက် ရန်ဖြစ်နေမယ် ဆိုရင် လူကြားလို့မကောင်းပါဖူး......တဲ့
Post by: ရွာဆော်ကြီး on March 27, 2013, 07:43:15 AM
“မင်းဘေးမှာ ငါထိုင်ပြီး စကားပြောနေခဲ့တာ တစ်နာရီမကတော့ဘူး ခုထက်ထိ
... တုန့်ပြန်မပြောသေးဘူး ကဲ ဒါဆိုလည်း ကိုယ်ပြန်ပါတော့မယ် နောက်ဆုံးခင်မင်မှု
Post by: ရွာဆော်ကြီး on March 28, 2013, 07:34:46 AM
မောင်ဘ ဆေးခန်းကိုလာပြီး ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်လေတယ်။
မောင်ဘ ။ ။''ဒေါက်တာ ၊ ကျုပ်မိန်းမ နားထိုင်းနေပြီထင်တယ် ။ စကားပြောရင် ပြန်မထူးဘူး ။အဲဒါ.. ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဒေါက်တာ ။''
ဒေါက်တာ ။ ။ ''ခင်ဗျားမိန်းမကို ဘယ်လောက် ထိုင်းနေလဲဆိုတာကို စမ်းသပ်မှု တော့ တစ်ခုလုပ်ရမယ် ။ ''
မောင်ဘ။ ။ ''ဟုတ်ကဲ့ ။ ဘာလုပ်ရမလဲ ပြောပါ ။ ''
ဒေါက်တာ။ ။ ''အခု အိမ်ပြန်ရောက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ ခင်ဗျားမိန်းမရဲ့ ၅ ကိုက်( ၁၅ ပေအကွာ )လောက်ကနေ စကားစပြော ကြည့် ။
မကြားရင် ၄ ကိုက်လောက်ကပ်ပြော ။ မကြားရင် ၃ ကိုက်။ မကြားရင် ၂ ကိုက် ၊ ၁ ကိုက် ကပ်ကပ်ပြီးပြောကြည့် ဗျာ ။
ပြီးရင် ဘယ်နှစ်ကိုက် လောက်မှာ စကြားရလဲ လာပြန်ပြောဗျာ ။ ပြီးရင်တော့ ဆေးကုဖို့ စတာပေါ့။ ဟုတ်ပီလား ''
မောင်ဘလဲ ဟုတ်ကဲ့ လို့ ပြောပြီး အိမ်ပြန်လာတယ် ။ အိမ်ရောက်တော့ မိန်းမက ထမင်းချက်နေတယ် ။
မိန်းမ မမြင်အောင် ၅ ကိုက်လောက်က စပြီး................
'' မိန်းမရေ ဒီနေ့ ဘာဟင်းချက် လဲကွ'' လို့ မေးလိုက်ပါ တယ် ။
မိန်းမဆီက ဘာသံမှ ထွက်မလာဘူး ။
ဒါနဲ့ ၄ ကိုက်လောက်က ပြန်မေးတယ် ။ ဘာမှပြန်မထူးဘူး ။
အဲဒါနဲ့ ၃ ကိုက် ၂ ကိုက်မေးတော့လဲ ဘာမှ ပြန် မဖြေဘူး ။
ဒါနဲ့ နောက်ဆုံး ၁ကိုက် ( ၃ပေ )..လောက်ကနေ အနားနားကပ်ပြီး....
နောက်ဆုံး......တော်တော်တင်းလာပီး ( ဂရုဏာသံနဲ့....ရောဂါရှင် ..ဖြစ်နေတာကိုး)
''သဲလေး ဒီနေ့ ဘာဟင်း ချက်လဲ '' လို့ မေးမှ မိန်းမဖြစ်သူက ပြန်ဖြေလိုက်တာပုံက.....
မိန်းမ။ ။ '' ရှင့်နယ်တော် ၅ ကြိမ် ရှိပြီ ဖြေနေတာ ။ ကြက်သားဟင်း တော်ရေ ။ကြက်သားဟင်း... ''.......တဲ့
Post by: ကြောင်ပါး on March 30, 2013, 03:53:25 PM
တနေ့တွင် ကိုစိုးနိုင်နှင့် မာဃလုလင်တို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ဦး ဆုံတွေ့လေရာ
…မာဃလုလင်သည် ညက သူ့မိန်းမနှင့် ရန်ဖြစ်လာသည့် အကြောင်းကို ပြောပြသည်။
မာဃ။ ။“ နောက်ဆုံးတော့ကွာ ငါ့ေ၇ှ့မှာ ငါ့မိန်းမ ဒူးထောက်ရတာပဲဟေ့…”
ကိုစိုးနိုင်။ ။ “အဲဒီတော့ မင်းမိန်းမက ဘာပြောသလဲ”
မာဃ။ ။ “ခုတင်အောက်က ခုထွက်ခဲ့စမ်းတဲ့”
ကိုစိုးနိုင်။ ။ “ တိန်”
လူပျိုကြီးတစ်ယောက်သည် အသက် ငါးဆယ်ကျော်ခါမှ မိန်းမယူချင်စိတ်ပေါက်လာသည်။ ထို့ကြောင့် သူ့ထက် ငါးနှစ်လောက်ငယ်သော အပျိုကြီးတစ်ယောက်ကို ကြံစည်လေသည်။
ဟိုကလည်း အပျိုကြီးပီပီ ဇီဇာကြောင်သူဖြစ်၏။
တစ်ရက်မှာတော့ အပျိုကြီးအိမ်သို့ သွားလည်သည်။ လူပျိုကြီးသည် ကွမ်းစားတတ်သူဖြစ်သောကြောင့် စကားပြောရင်း ကွမ်းတံတွေး တပျစ်ပျစ်ထွေးနေ၏။ ဒါကိုမြင်တော့ အပျိုကြီးက ရှုံ့မဲ့လိုက်ပြီး...
"ကျွန်မကတော့ ကွမ်းစားတာကို လုံးဝသဘောမကျဘူး။ ကြည့်ပါလား ကွမ်းသိပ်စားတော့ သွားတွေတောင် မည်းနေပြီ"
"သွားတွေမည်းပေမယ့် ဆံပင်ကတော့ ဖြူပါတယ်ဗျာ"
ဟု ပြောမိပြောရာ ပြောလိုက်လေသည်။
၁။ Hard Disk Girls
၂။ RAM Girls
ပိတ်လျှင် မေ့သွားတတ်သော အမျိုးအစား
၃။ Screen Saver Girls
၄။ Server Girls
၅။ Multimedia Girls
ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး လှအောင် ဖန်တီးတတ်သူ
၆။ Internet Girls
မြင်ရန် (Access လုပ်ရန်) ခက်ခဲ
၇။ Virus Girls
These type of girls are normally called 'WIFE' once enters in your system don't leave even after format... :x Tongue
Post by: ကြောင်ပါး on March 31, 2013, 11:29:20 AM
မနီအိပ်အိုက်နေသဖြင့်မကြားသော်ကြောင့် သူမနောက်တွင်ထိုင်နေသောကိုဖြိုးမှ ဘော့ပင်နှင့်ထိုး၍ သတိပေးလိုက်သည်။
ဆရာမမေးသည်ကို မနီမကြား ၊ အိပ်လို့ ကောင်း နေသည် ၊ ထို့ကြောင့်ကိုဖြိုးမှ ဘော့ပင်ဖြင့်ထိုး၍သတိပေးရပြန်သည်။
Post by: ကြောင်ပါး on April 04, 2013, 02:24:04 PM
လူရယ်လို့ ဖြစ်လာကတည်းက လူတိုင်းအတွေးမျိုးစုံ တွေးကြတာပါပဲ ။ ကျွန်တော်လည်း အပါအ၀င်ပေါ့ ။ အဲဒီအ ထဲကမှ ရယ်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်လေးတွေ ၊ သင်ခန်းစာ ယူစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်လေးတွေကို ရေးသား ပါဦးမယ် ။ တစ်ခါတုန်းကပေါ့ ။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော် ဆေးကျောင်း 1st year တက်နေပြီ ။ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ နိုင်ဇော်ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ် ။ သူကတော့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့စွံ တယ်လို့ပဲ ပြောရမလား ။ အရွယ်မတိုင်ခင် ၀န်ပိတယ်ပဲ ပြောရမလား ။ ၁၀ တန်းကတည်းက မိန်းမရနေပြီ ။ သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့က ငယ်သူငယ်ချင်းတွေ ။ သူရသွားတဲ့ မိန်းမကလည်း ( အမှန်ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ ၀ိုင်း လှော်ပေးလို့ အဓိက ကျွန်တော်ပေါ့ ) ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းပါပဲ ။ ဒင်းတို့ ဘယ်လို ညားသွားကြသလည်း ဆိုတာ ကျွန်တော်မြှားနတ်မောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း နောက်မှပြောပါဦးမယ် ။ နိုင်ဇော်နဲ့ ကျွန်တော်နဲ့က စားအိမ်သောက်အိမ်ဆိုတော့ အမြဲဝင်ထွက်နေကြ ၊ စားသောက်နေကြပေါ့ ။
တစ်နေ့ပေါ့...။ အဲဒီတစ်နေ့မှာ လူက ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ နိုင်ဇော့်ကိုခေါ်ပြီးဂိမ်းသွားဆော့မယ်ဆိုပြီး ထွက်လာခဲ့ပါတယ် ။ (ဂိမ်းဆော့တယ်ဆိုလို့ ကလေးမထင်လိုက်နဲ့နော် Mario တို့လို တင့်ကားတို့လို ဆော့တာ မဟုတ်ဘူး ဘောလုံးကန်ရင်ကန် မကန်ရင် Resident Evil တို့လို Final Fantasy တို့လို ဇတ်လမ်း ဂိမ်းတွဲတွေ ဆော့တာပါ ) အဲလေ...ပြောရင်း ချော်ကုန်ပြီ ။ အဲဒီလိုနဲ့သူတို့ အိမ်ရှေ့ရောက်တော့ လူတစ်ယောက်မှ မတွေ့ဘူးခင်ဗျ ။ ဘယ်ရမလည်းလေ ဒင်းတို့ အိမ်နောက်ဖေးဖက်က ဘယ်တော့မှ ပိတ်လေ့မရှိဘူးဆိုတာ သိတာပေါ့ ။ သူတို့ လင်မယားက တခါတခါ အဲဒီလို အိမ်ရှေ့တံခါးကြီး ပိတ်ပြီး ဘာလုပ်မှန်းမသိပါဘူး ။ (တမျိုးမထင်နဲ့နော် အပျင်းထူပြီး တံခါးကို ထမဖွင့်တာ ကျွန်တော်အသိဆုံး ) ဒါနဲ့ ကိုယ်လည်း အိမ်ဘေး ကနေပတ်ပြီး အိမ်နောက်ဖေးပေါက်ကို ပတ်သွားတာပေါ့ ။ အိမ်အလည် မရောက်တရောက်မှာပဲ ကြားလိုက် ရတဲ့အသံကြောင့် ကျွန်တော့်ခေါင်းတွေ ထူပူသွားပါတယ် ။
“ ကိုကို...ဆောင့်လေကွာ အားမရှိဘူးလား တကတည်း ယောင်္ကျားမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲ ”
“ ဟ.. ဆောင့်တာပဲဟ ငါလည်း အားကုန်နေပြီ နင့်ဟာက ထွက်မှမထွက်ပဲ ”
“ အာ..ကိုကိုဆောင့်နေပုံနဲ့ ဒီနေ့ပြီးတော့မှာမဟုတ်ဘူး ဖယ်ဖယ်မိန်းမဆောင့်ပြမယ် ”
ဟိုက်..ကြားလိုက်ရတဲ့အသံတွေကြောင့် ကျွန်တော့်မှာ ဆက်ပြီးပဲ ၀င်ရမလို နောက်ပဲ ပြန်ဆုတ်ရမလိုနဲ့ ကိုယ်လာ တာ အခွင့်မသင့်ဘူးလားမသိဘူး ဆိုပြီးတော့လည်း တွေးလိုက်မိသေးတယ် ။ ဆက်နားထောင် ကြည့် ပါဦး ။
“ ဟ..မိန်းမရ ဖြည်းဖြည်းဆောင့်ပါဟ ကျိုးကုန်တော့မှာပဲ ”
“ အို..ကိုကိုကလည်း အဲဒါမှ ထွက်မှာပေါ့လို့ ဟွန်း ”
ကြားရတဲ့အသံတွေကလည်း ဇွပ်..ဇွပ်နဲ့ ကျွန်တော်လည်း ခြေဖျားလက်ဖျားတွေ အေးစက်လာပြီး မဖြစ်ချေ တော့ဘူးဆိုပြီး အသံပေးလိုက်ပါတယ် ။
“ အဟမ်း..ဟမ်း ”
“ အော့..သက်တန့်လား လာဟေ့ ဒီမှာ ငါ့မိန်းမကို ကူဆောင့်ပေးပါဦး လာဝင်ခဲ့ နောက် ဖေးတံခါးဖွင့်ထားတယ် ”
“ ဟေ..ငါ ..ငါ ၀င်လာရမှာလား ”
“ အောင်မလေး သက်တန့်နော် နင်ကလည်း ဒီမှာငါ့ကို ကူဆောင့်ပေးပါဆို တကတည်း အထာကိုင်နေလိုက်တာ လာမြန်မြန်”
ကျွန်တော်လည်း ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်ကို အဖြေအမြန်သိချင်တတ်တဲ့ ဥာဉ်အတိုင်း တံခါးဖွင့်ပြီး ၀င်ကြည့်တော့မှ လား..လား ဒင်းတို့ ၂ ကောင်က ၁ ယောက်က ရေပိုက်လုံးကိုင် သူ့မိန်းမက အပေါ်က ပိုက်လုံးကို ဒုတ်နဲ့ ထိုးချပြီး ဘေ စင်ကရေပိုက်ဆို့နေလို့ ပြင်နေကြတာကိုး ဟိဟိ..။ ဒါကြောင့် ဒင်း မိန်းမက တော်ဆောင့်နေတဲ့ပုံနဲ့ ဒီနေ့ ထွက်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဆို့နေတဲ့ အမှိုက်တွေကိုပြောတာကိုး ဟားဟား..။ ဒါကြောင့် ခင်ဗျားတို့လည်း အသံ လေးကြားယုံနဲ့ ဘာကိုမှ ဆုံးဖြတ်ချက်မချလိုက်ပါနဲ့ ။ တခါတလေ လွဲမှားတဲ့အတွေးတွေ ဖြစ်နေတတ်လို့ပါပဲ ။
Post by: ကြောင်ပါး on April 07, 2013, 09:45:25 PM
ယောက်ျား - ခြင်ထောင်ထဲ ၀င်ခွင့်ပြုပါ
မိန်းမ - အမြန်ဝင် ပြီးရင် သတင်းပို့
ယောက်ျား - ခြင်ထောင်ထဲဝင်ရောက်ရန် အကြောင်းပေါ်ပေါက်ပါပြီလား
မိန်းမ - လျော်ကန် သင့်မြတ် သဖြင့် ၀င်ခွင့်ပြုလိုက်သည်
ယောက်ျား - အပြင်မှာ ခြင်များ သောင်းကျန်းနေပါသဖြင့် ခြင်ထောင်ထဲ ပေးဝင်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ သိရှိလိုပါတယ်
မိန်းမ - ကလေးသေးတည်ပြီးသည့် ( ကော်မရှင်ဖွဲ့ချိန်= စဉ်းစားချိန်)အချိန်တွင် စဉ်းစားပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း။
ယောက်ျား -သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါ ကျရောက်မှာစိုးရတယ်
မိန်းမ -ခြင်ထောင်အပြင်မှာ ခြင်ဆေးခွေ ထွန်းပီး ၀င်ခဲ့လေ ဒေါက်တာ။
ယောက်ကျား - မိန်းမရေ ငါခြင်ထောင်ထဲ ၀င်လာ.ပီဟေ့......ဝေါ်..ဝေါ် ..ဝေါ်.....( ဒုန်း )
မိန်းမ - အွတ်စ် ...တေပါပီရှင်။ ခြင်ထောင်ထဲမှာ မီးမလောင်ဖူးရှင့်။
ယောက်ကျား - တာဝန်အရခြင်ထောင်ထဲဝင်မယ်
မိန်းမ- ဆူပူ မှူ မဖြစ်ရန် နဲ့ တည်ငြိမ်မှူ ရရှိဖို့ ၀င်လာခဲ့။ဒါပဲ
Post by: kyawkyawlwin on April 10, 2013, 01:44:46 PM
အကို ။ ။ ကြာတယ်ဗျာ .. မနက်ဖြန် ဒီကောင့် Account ကို Report ဝိုင်းတင်ကြမယ် ။ တဆွေလုံး တမျိုးလုံး Report လုပ်ရင် သေချာပေါက် ပျက်တယ် ။
သမီး ။ ။ ရက်စက်လိုက်တာ .. အမေတို့ရယ် ...အဟင့် (ကျဥ ကျဥ )
- နောက်ဆုံး တကယ် အကြီးကြီး ကြေကွဲဖို့ ကောင်းတာက Facebook ပေါ်မှာ .......
ကောင်မလေး ။ ။ သူ .. သူနဲ့ ဒို့ ကို မိဘတွေက Like မလုပ်နိင်ဘူးတဲ့ ။ ဒို့ကိုလည်း Page Admin တယောက်ရဲ့ သားနဲ့ Relationship လုပ်ခိုင်းကြတော့မယ် ။ ဒို့ကို Unfriend လိုက်ပါတော့ ကွယ် ... အဟင့်ဟင့် ( ပလောက် .. ပလောက် )
ကောင်လေး ။ ။ ဘာ !!!
မင်းတို့ မိသားစု အဲ့လောက် Like တွေ ၊ Share တွေ မက်မှန်း အစက မသိခဲ့ဘူးကွာ ... ခုတော့ Page Admin ရဲ့သားနဲ့ ဆိုတော့ ... ဟားးး
မင်း တဘဝလုံး အတွက် Connection ကောင်းပြီပေါ့ကွာ ... ဟားဟားဟားး (ဂရား ဂရားး)
ကောင်မလေး ။ ။ အဲ့လိုမျိုး မပြောပါနဲ့ သူရယ် ....
ဒို့က ငယ်ငယ်တည်းက မိဘတွေ Suggest သမျှကို
Confirm ရတဲ့ သူပါ ...တခါမှကို Cancel မလုပ်ရဲတဲ့ သူပါကွယ်.. ဒို့ကို ခွင့်လွှတ်ပါနော် ..ဒို့ကို Unfriend မြန်မြန်လုပ်လိုက်ပါတော့နော်... ဒို့ မခံစားနိင်တော့ဘူး ..
ကြာရင် ဒို့ Accocount ကို ဒို့ Deactivate လုပ်မိတော့မယ် .. .အဟင့်ဟင့် ( ကျအု .. ကျအု )
ကောင်လေး ။ ။ ဂလောက် ဖစ်နေတာာ .. မတာမ .. Block ပြီဟ .. ...Block ပြီ / Block !!!!!!
ထိုအချိန်မှ အစပြ၍ အနှီ သူငယ်သည် Facebook ပေါ်တွင် မဖြစ်ညစ်ကျယ် Page လေးတခု
ထောင်ကာ ပေါက်တတ်ကရများကို ရေးသား နေလေတော့သည် တမုံ့ ။
Post by: ကြောင်ပါး on April 22, 2013, 10:24:05 AM
ဆေးရုံတွင်တက်ရောက်ကုသနေသော လူငယ်တစ်ဦးက သူနာပြုဆရာမလေးတစ်ဦး၏လက်ကိုကိုင်ကာ ပြောလေသည်-
လူငယ်။ ကိုယ်မင်းကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားနေပြီကွာ၊
သူနာပြု။ ဘေးမှာ လူတွေရှိတယ်ရှင့်၊
လူငယ်။ ကိုယ် ဂရုမစိုက်နိုင်တော့ဘူးကွာ၊
လူငယ်။ ရောဂါလည်း မပျောက်ချင်တော့ပါဘူး၊
လူငယ်။ ဆေးရုံက မဆင်းချင်တော့လို့လေ၊
သူနာပြု။ အဲ့ဒါတော့ စိတ်ချ၊
သူနာပြု။ ရှင် ကျမလက်ကို ကိုင်ပြီးစကားပြောနေတာကို ဒေါက်တာတွေ့သွားတယ်လေ၊
သူနာပြု။ သူကလည်း ကျမကိုစိတ်ဝင်စားနေတာဆိုတော့......ရှင့်ရောဂါပျောက်ဖို့ မလွယ်တော့ဘူးပေါ့၊
စတိတ်ရှိုးပွဲတစ်ခုတွင် သီချင်းဆိုပြီးနောက် စင်အောက်သို့ဆင်းလာသော အဆိုတော်တစ်ဦးအား အမှတ်တရလက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းသူ ပရိတ်သတ်များ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်လျှက်ရှိရာ အမျိုးသားကြီးတစ်ဦးရောက်လာပြီး မေးလေသည်-
အမျိုးသားကြီး။ သံစဉ်တွေနဲ့ တီးလုံးတွေနဲ့ကလည်း မြိုင်ဆိုင်နေတာပဲ၊
အမျိုးသားကြီး။ အသံကိုလည်း ဟိန်းထွက်အောင်ဆိုနိုင်တယ်နော်၊
အမျိုးသားကြီး။ အကူအညီတစ်ခုလောက် တောင်းချင်လို့ပါ၊
အဆိုတော်။ ပြောပါဗျာ.... အမှတ်တရလက်မှတ်ရေးထိုးပေးရမလား၊ သီချင်းခွေထုတ်ချင်လို့များလား၊
အမျိုးသားကြီး။ မဟုတ်ပါဘူး.... ကျနော့ဇနီး ပွဲခင်းထဲမှာရှာမတွေ့လို့ အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ အော်ခေါ်ပေးဖို့ပါပဲ၊
Post by: ကြောင်ပါး on April 23, 2013, 11:32:51 PM
“အားလုံးမလှုပ်နဲ့၊ ပိုက်ဆံကအစိုးရဟာ၊ အသက်က မင်းတို့ဟာ။ ”
ဟု တရားသဘောဆန်ဆန် အော်ဟစ်လိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက်၊ ဘဏ်ဝန်ထမ်း အားလုံး ငြိမ်သက်စွာ
ထိုအချိန် ဓါးပြက စားပွဲပေါ် ပက်လက်လေးလှန်ကါ လှဲလျောင်းနေရှာသော ဘဏ်စာရေးမလေးကို တချက်လှမ်းကြည့်ရင်း
” အမြင်မတော်ကွာ၊ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့လေး နေစမ်း၊ ဒါဓါးပြတိုက်တာ၊ မုဒိမ်းလာကျင့်တာ မှုတ်ဘူး။ ”
” ဆရာ… တိုက်ရတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ ရေတွက်ရအောင်။ ”
“တော်တော်နုံချာတဲ့ကောင်၊ ဒီလောက်များတဲ့ဥစ္စာ ဘယ်အချိန်ထိ ရေတွက်နေရမှာလဲကွာ၊ ဒီညTV သတင်း စောင့်နားထောင်ကြည့်ရင် သိရောပေါ့။ ”
” သွား…မြန်မြန်ရဲသွားတိုင်စမ်။ ”
” နေအုံး…တလောတုန်းက ငါတို့အလွဲသုံးစားထားတဲ့ သန်း ၅၀ ပါတခါထဲ ပေါင်းထည့်ပလိုက်ကွာ ”
” တောက်…ငါအသက်ကိုဖက်နဲ့ထုပ်ပြီး တိုက်တာတောင်မှ သန်း ၂၀ ပဲရတယ် ဘဏ်ဥက္ကဌက ပါးစပ်ဖျားလေးလှုပ်လိုက်ရုံနဲ့ သန်း ၅၀ အမြတ်ပေါ်သွားပြီ။
ဒီခေတ်ကြီးကြည့်ရတာ ပညာတတ်မှ ဖြစ်တော့မယ်ဗျာ…။
Post by: mg lynn on April 29, 2013, 07:22:54 AM
The Priest and The Passenger
Post by: ကြောင်ပါး on May 03, 2013, 03:48:48 PM
ချစ် ကိုမကြာခင်နိုင်ငံခြားကရောက်လာမယ့် Iphone6နဲ့ပေးစားတော့မယ် မောင်…..
အမေတို့က andriod မိသားစုနဲ့သဘောမတူနိုင်ဘူးတယ့်…
လူကြီးတွေရဲ့စိတ်ကို ချစ် နားမလည်တော့ဘူးမောင်….
မေမေတို့က အမျိုးတူ IOS မှအထင်ကြီးတာ…
Touch screen ခြင်းအတူတူ ဘာလို့သဘောမတူရတာလဲမသိဘူးနော်…
ချစ်ကတော့ touch မကောင်းရင်နေပေ့စေ
ချစ်ကို ၁၅၀၀ တန် sim card တွေမထွက်ခင်အမြန်လာခိုးပါတော့နော်….
မောင်လာမခိုးရင်ချစ် ကိုယ့်ကိုကိုယ် Jailbreak လုပ်ပစ်မှာနော်…
Post by: mg lynn on May 04, 2013, 01:50:39 AM
စိတ်ရောဂါ စွဲကပ်နေသော လူနာကို နောက်ဆုံးးပေါ် အထူးစနစ်ဖြင့်ကုသ စမ်းသပ်စစ်ဆေးရန် ဆရာဝန်တစ်ဥိးမှ ဆုံးဖြတ်လိုက်၏။
လူနာအား ဆရာဝန်မှ ပြော၏။
" မင်း...သိရဲ့လား...လွန်ခဲ့တဲ့ တနဂ်နွေနေ့ က ကမ်းနား လမ်းမကြီး ပေါ်မှာ အင်မတန်ကျေကွဲဖွယ် ကောင်းတဲ့ ကား တိုက်မှူ တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။
ငါကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ လမ်းဖြတ်ကူးလာတဲ့ လူငယ်ကို အရှိန်နဲ့လာတဲ့ ကုန်တင်ကား တစီးက နင်းကြိတ်လိုက်တာ...လူငယ်ရဲ့ ခေါင်းပြတ်ထွက်သွားတယ်ကွ။
ဒါပေမဲ့ လူငယ်ဟာ လဲနေရာက ထပီး သူရဲ့ဦးခေါင်းကိုကောက်ယူတယ်...။ အနီးဆုံးဆေးခန်းကိုရှာတယ်။
ကံကောင်းစွာပဲ အတိုက်ခံရတဲ့ နေရာနဲ့ မနီးမဝေးမှာ ခြမ်းမြေ့ လို့ခေါ်တဲ့ အရိုးအကြောပြန်ဆက်ပေးနိုင်တဲ့ နံမည်ကြီး တရုတ်ဆေးခန်းရှိတယ်။
အဲဒီ နောက် သူ့ခေါင်းပြတ် ကို သူ့ရဲ့ကိုယ်နဲ့ ပြန်ဆက်ဖို့အတွက် အဲဒီ ကမ်းနားလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့တရုတ် ဆေးခန်း ကို ကိုင်ပီး ထွက်သွားတယ်......။ "
ထိုနေရာတွင် လူနာ သည် မယုံကြည်သည့်မျက်နှာဖြင့် ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်လေသည်။
" ဒေါက်တာပြောတဲ့ ဇာတ်လမ်း မှာ အရေးကြီးတာတခုလွဲနေတယ်ဗျ။
အဲဒီကမ်းနားလမ်းက ချမ်းမြေ့ လို့ခေါ်တဲ့ တရုတ်ဆေးခန်း က တနင်္ဂနွေနေ့ မှာ မဖွင့်ဖူးလေဗျ.ာ.."....
Post by: mg lynn on May 04, 2013, 01:54:24 AM
တစ်ခါက အလွန်ချမ်းသာသော လူတစ်ယောက်သည် မြေ ဧက ၄၀၀ ကျော်သော မြေတစ်ကွက်ကိုဝယ်လိုက်၏။
ထိုသို့ ၀ယ်ရာတွင် တန်ဖိုးထက် အဆမတန် ပိုပေး၍ ၀ယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်၏။ ဤသို့ ၀ယ်ရခြင်းမှာလည်း ၄င်းခြံထဲတွင် သက်တမ်းနှစ် ၃၀၀ ကျော် ပြီဖြစ်သော ထင်းရူးပင်ကြီး တစ်ပင် ရှိသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်။
ူသူဌေးကြီးမှ မိတ်ဆွေများအား ထင်းရူးပင် ကြီး အကြောင်းကို ပြောပြသောအခါ မယုံကြည်ကြပေ။...
သို့နှင့် သဌေးကြီးလည်း မိတ်ဆွေများအား သက်သေပြရန် ထိုခြံစောင့်လုပ်သူကို ခေါ်ပီး .....ထင်ရူးပင် သက်တမ်း အတိအကျ သိရအောင် စုံစမ်းရန် စေလွှတ်လိုက်၏။
လေးရက်ခန့် ကြာသောအခါ ထိုခြံစောင့်ပြန်ရောက်လာ၏။
သဌေးကြီး ကိုလည်း သူတွေ့ ရှိခဲ့သည်များကို ၀မ်းသာအားရနှင့် ပြောပြ၏။
" သတင်းကောင်းပဲ......သဌေးကြီး ခင်ဗျာ။ အဲဒီ ထင်းရူးပင်ကြီးဟာ သက်တန်း ၃၃၂ နှစ် ရှိပါပြီ ...."
သဌေးကြီးလည်း မိတ်ဆွေများရှေ့တွင် ပြုံးရွှင်စွာဖြင့်.......
" တယ်ဟုတ်ပါလားကွ။....မင်းတယ်တော်ပါလား...။ဒါနဲ့ ဒီလို အတိအကျ သိရအောင် မင်းဘယ်လို စုံစမ်းခဲ့သလဲ ဟေ့..".ဟုမေးလေသည်။
ထိုအခါ ခြံစောင့်မှ ပြန်ဖြေလိုက်တာက........
" လွယ်လွယ်လေးပါ ခင်ဗျာ....။သစ်ပင်ကြီးကို ခုတ်လှဲပီး ပင်စည်က အ၀ိုင်း တွေကို ရေတွက်ကြည့်လိုက်တယ်လေ...
Post by: mg lynn on May 04, 2013, 01:59:39 AM
ဖခင်တစ်ဦးဟာ သားကြီးလာရင် ဘာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ စမ်းသပ်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ စမ်းသပ်မှုမှာ ဖခင်က စားပွဲခုံပေါ် ပစ္စည်း(၃)မျိုးတင်လိုက်တယ်။
ကျမ်းစာတစ်အုပ် -------- ဘာသာရေးအကြီးအကဲ
ဝီစကီတစ်ပုလင်း -------- အရက်သမား
ဖခင်ဟာ စားပွဲပေါ်ပစ္စည်းတွေတင်ပြီး သားပြန်အလာကို တံခါးနောက်ကနေ ချောင်းကြည့်နေခဲ့တယ်။ တအောင့်နေတော့ သားဟာ လေလေးချွန်ပြီး ပြန်လာပါတယ်။
စားပွဲပေါ်က ပစ္စည်းတွေကိုတွေ့တော့ ဘေးဘီကို လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ အခန်းထဲမှာ တစ်ယောက်မှမရှိမှန်း သိတော့ ဒေါ်လာကိုယူပြီး အလင်းမှာထောင်ကြည့်လိုက်တယ်။
ပြီးတော့ ကျမ်းစာကို လှန်လျောကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ ဝီစကီပုလင်းကိုဖွင့်ပြီး နမ်းကြည့်တယ်။ အဲဒီနောက် ပိုက်ဆံကို အိတ်ကပ်ထဲထည့်၊ ကျမ်းစာကို လက်မောင်းကြားညှပ်ပြီး ဝီစကီပုလင်း မ,ပြီး လေလေးချွန်လို့ ပြန်ထွက်သွားတယ်။
သားအပြုအမှုကို ကြည့်ပြီး ဖခင်ဖြစ်သူ လန့်သွားတယ်။ ပါးစပ်ကလည်း စကားတစ်ခွန်း ခုန်ထွက်ပါလာတယ်။
"အလို... သူ နိုင်ငံအကြီးအကဲ လုပ်မှာပါလား!"
Post by: mg lynn on May 04, 2013, 02:03:10 AM
တခါတုန်းက ပညာရေးဌာနက စစ်ဆေးရေးအရာရှိတယောက်ဟာ နယ်မြို့လေးတစ်မြို့က စာသင်ကျောင်းတကျောင်းကို စစ်ဆေးရင်း ကျောင်းသားလေး တယောက်က်ို မေးလိုက်ပါတယ်။
"ကနောင်မင်းသားကို ဘယ်သူ သတ်သလဲကွ"
ကျောင်းသားလေးဟာ တော်တော်လေး ကြောက်ရွံ့သွားပါတယ်။
အသံတွေတုန်ပြီး… "ကျ ကျနော်မသတ်ဘူး" တဲ့။
ပညာရေးအရာရှိဟာ ကလေးရဲ့ ပညာရေးအခြေအနေအပေါ် အတော်လေး မကျေမနပ်ဖြစ်သွားပြီး အတန်းပိုင် ဆရာမကို လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ အတန်းပိုင် ဆရာမလည်း ကမန်းကတမ်းနဲ့ ကျောင်းသားလေးအတွက် စိတ်ပူပြီး ကျောင်းသားလေးဖက်က ကာကွယ်ပြီး ပြောလိုက်တာက-
"ဒီကျောင်းသားလေးဟာ အတန်းထဲမှာ သိပ်အေးပါတယ်ဆရာ။ ကျောင်းသားတွေအချင်းချင်းတောင် ရန်ဖြစ်တာ မရှိပါဘူး။ သူသတ်တာတော့ မဟုတ်နိုင်ဘူးထင်ပါတယ်ရှင်" တဲ့။
စစ်ဆေးရေး အရာရှိလည်း ဘာမှ ဆက်မပြောတော့ပဲ မျက်စိမျက်နှာပျက်ပြီးပြန်သွားပါတယ်။ နောက်တော့ဖြစ်ကြောင်း ကုန်စင်ကို ပညာရေးဝန်ကြီးဆီ စာတင်လိုက်သတဲ့။
ဒီလိုနဲ့ မကြာခင် ၀န်ကြီးက အခုလို စာပြန်လာပါတော့တယ်။
"ကနောင်မင်းသား သေတာလည်းကြာပါပြီ။ နောက်ထပ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်မနေပါနဲ့တော့"...ဟူသတည်း။
Post by: mg lynn on May 04, 2013, 02:08:48 AM
အဝေးပြေးလမ်းတွင်ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှု တစ်ခုအတွက် သက်ဆိုင်ရာမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ကြသည်။ အခင်းဖြစ်ပွားမှုတွင် ယာဉ်ပေါ်တွင်ပါလာသော လူအားလုံးမှာ ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ကြပြီး
ထို ယာဉ်ပေါ်တွင်ပါလာသော မျောက်တကောင်သာ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သည်။ ရဲများမှာ အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့ စုံစမ်းရန် အတွက် အခက်တွေ့နေကြသည်။ ကံကောင်းချင်တော့ ထိုကားပေါ်တွင် ပါလာသော မျောက်မှာ လူတို့ပြောစကား နားလည်ပြီး သူကိုယ်တိုင်ကလဲ ခြေဟန်လက်ဟန်နှင့် ပြန်ပြောနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ရဲအရာရှိ။ ။(၀မ်းသာသောအမူအရာဖြင့်) Ok ဘယ်မှာလဲ ? ဘယ်မှာလ?ဲ
ထိုအခါ ရဲအရာရှိက ဆက်မေးသေးသည်...
မျောက်။ ။ဗိုက်ပုတ်နေသောလက်ကိုအောက်သို့ဆင်းကာ ထပ်ပုတ်ပြလိုက်လေသတည်း....။
Post by: ကြောင်ပါး on June 18, 2013, 12:40:16 PM
ဘောင်းဘီထဲ ဘဲအရှင် .
တစ်ခါတုန်းက တောရွာတစ်ရွာမှာနေထိုင်တဲ့ လူကြီးတစ်ဦးက
မြို့ရောက်တော့ ဘဲတစ်ကောင်ကိုင်ပြီး လျှောက်သွားနေတဲ့သူ့ကို မြို့ကလူတွေ
စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ ဘဲကိုလူမမြင်အောင် ဘောင်းဘီထဲထည့်တားလိုက်ပါရော၊
ပြီးတော့ ဘဲအသက်ရှုနိုင်ဖို့ ဘောင်းဘီကို ကြယ်သီးသာတတ်ပြီး
ဇစ်ကိုဆွဲမတင်ထားတော့ပဲ ဟထားလိုက်ပါသတဲ့ ၊
ကားမှတ်တိုင်မှာ ကားစောင့်နေခိုက်မှာ သူနဲ့သက်တူရွယ်တူ
သေသေချာချာ စိုက်ကြည့်နေတာကိုတွေ့တော့ သူတော်တော်စိတ်ဆိုးသွားပြီး မေးလိုက်တယ်
“ခင်ဗျားက ဘာကြည့်နေတာလဲဗျ ကြည့်နေတာ မမြင်ဘူးတာကြနေတာပဲ”
အဲဒီမိန်းမကလည်း ခပ်ဆတ်ဆတ်ပဲ ပြန်ဖြေလိုက်တာကတော့
ဒီလိုပေကလပ် ပေကလပ် လုပ်ပြနေတဲ့ဟာကိုတော့
Post by: ၀င်း on June 22, 2013, 09:35:15 PM
" ကျွန်ုပ်၏ မဟာတီထွင်မှုကြီး ၆ ခု"
ကျွန်ုပ်သည် စက်မှုတက္ကသိုလ် ပထမနှစ် ကျောင်းသားဘဝကပင် တီထွင်မှုများစွာကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏ တီထွင်မှုများ၊ တွေးခေါ်ဆင်ခြင်မှုများမှာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် များစွာမြင့်မားလာခဲ့ရာ၊ စတုတ္ထနှစ်အရောက်တွင် ဆရာများမှ တောင်းပန်သည်ဖြစ်၍ ကျောင်းမှ နုတ်ထွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
မိမိတစ်ဦးတည်း ဥာဏ်ပညာများစွာမြင့်မားနေပြီး ကျန်သည့်ကျောင်းသားများ လိုက်မမှီဖြစ်ကာ စိတ်ဓါတ်ကျမည်ကို စိုးရိမ်ပူပန်သော ဆရာများ၏စိတ်ကို ကျွန်ုပ် နားလည်နိုင်ပါသည်။
ကျောင်းမှ မထွက်မှီ (ယခင်က) တံတားလေးလမ်းဆုံအနီးရှိ ဌာနတစ်ခုသို့ သွားရောက်၍ ကျွန်ုပ်၏ ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေး (IQ) အား သွားရောက်ပြသစစ်ဆေးကြပါသေးသည်။
ထိုဌာနမှဆရာများမှလည်း ကျွန်ုပ်အား ကျောင်းဆက်တက်ရန် မလိုလောက်အောင် တတ်သိနားလည်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုထောက်ခံကြပါသည်။
သို့ဖြစ်၍ ကျောင်းမှ နုတ်ထွက်ပေးခဲ့ကာ ကျွန်ုပ်ကိုယ်ပိုင် စမ်းသပ်ခန်းတစ်ခုအား တည်ဆောက်၍ တီထွင်မှုများစွာကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပေသည်။
လူသားများ ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများကို ပြေလည်စေရန်ရည်ရွယ်၍ တီထွင်ပေးခဲ့သော်လည်း တစ်ချို့မှာ ကျွန်ုပ်၏ စေတနာကို နားမလည်နိုင်ကြဘဲ ပြစ်တင်ဝေဖန်ကြလေ၏။
မည်သည့်အရာမဆို အကျိုးနှင့်အပြစ် နှစ်မျိုးလုံး ရှိတတ်သည်မှာ ဓမ္မတာပင်ဖြစ်သည် မဟုတ်လော။
အောက်တွင် ကျွန်ုပ်၏ တီထွင်မှုများကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
တီထွင်မှု အမှတ် (၁)
အမည် - Water-proof towel (ရေစိုခံတဘက်)
ရည်ရွယ်ချက် - ရေချိုးပြီး၍ တဘက်ဖြင့် သုတ်သောအခါ၊ တဘက်ရေစိုသဖြင့် လျှော်ဖွတ်ရခြင်း၊ အခြောက်လှန်းရခြင်းများမှ ကင်းဝေးစေရန်။
အားနည်းချက် - ရေမစိုနိုင်သဖြင့် ရေလည်းမစုပ်နိုင်။ ထို့ကြောင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိ ရေများကိုယ်လည်း စုပ်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်။
အများ၏ဝေဖန်ချက် - ‘တဘက်ပါဆိုမှ ရေမစုပ်နိုင်မှတော့ ဘယ်ကလာ သောက်သုံးကျတော့မှာလဲ’
တီထွင်မှု အမှတ် (၂)
အမည် - Solar powered flashgun (နေစွမ်းအင်သုံး ကင်မရာမီး)
ရည်ရွယ်ချက် - ကင်မရာများတွင် ဓါတ်ခဲများ အသစ်လဲလှယ်ရခြင်း၊ အားပြန်သွင်းရခြင်း အစရှိသည့် ဒုက္ခတို့မှ ကင်းဝေးစေရန်
အားနည်းချက် - နေ၏အလင်းရောင် ကောင်းစွာရရှိရန်လိုအပ်သည်။ အလင်းရောင်အားနည်းသောနေရာနှင့် ညအချိန်များတွင် အသုံးပြု၍ မရနိုင်
အများ၏ဝေဖန်ချက် - ‘နေရောင် အလင်းရောင် ကောင်းကောင်းရနေမှတော့ နင့်လင်ကြီးကို သုံးစရာ မလိုပါဘူးဟ’
တီထွင်မှု အမှတ် (၃)
အမည် - Submarine mosquito proof window screen
ရည်ရွယ်ချက် - ရေငုပ်သင်္ဘောများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ရေတပ်သားများ ခြင်ကိုက်ခြင်းမှ ကင်းဝေးစေရန်
အားနည်းချက် - ခြင်တော့လုံသည်။ ရေမလုံ
အများ၏ဝေဖန်ချက် - ‘ဟကောင်၊ ရေအောက်မှာ ခြင်မရှိဘူး၊ ရှိလည်း ရေမလုံတဲ့နင့်ဟာကြီးကို ရေငုပ်သင်္ဘောမှာတပ်တော့ ခြင်ကိုက်လို့မသေဘဲ ရေမြုတ်လို့သေကုန်မှာ’
တီထွင်မှု အမှတ် (၄)
အမည် - Ejector seat inahelicopter (အရေးပေါ်ခုန်ထွက်ထိုင်ခုံ)
ရည်ရွယ်ချက် - တိုက်လေယာဉ်မှုးများနည်းတူ ဟယ်လီကော်ပတာမောင်းသူများကိုလည်း အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် ခုန်ထွက်နိုင်စေရန် ဂျက်အင်ဂျင်တပ် အလိုအလျှောက်ခုန်ထွက် ထိုင်ခုံ
အားနည်းချက် - အားနည်းချက် မရှိပါ
အများ၏ဝေဖန်ချက် - ‘တိုက်လေယာဉ်မှာက အပေါ်ကိုခုန်ထွက်သွားလို့ ပြဿနာမရှိဘူး၊ ဟယ်လီကော်ပတာမှာက အပေါ်မှာပန်ကာကြီးနဲ့၊ ဟယ်လီကော်ပတာပျက်လို့ မသေ၊ ပန်ကာခုတ်လို့ ခေါင်းပြတ်ပြီး သေမှာ’
တီထွင်မှု အမှတ် (၅)
အမည် - Pedal-powered wheelchair (ခြေနင်းအားသုံး ဘီးတပ်ကုလားထိုင်)
ရည်ရွယ်ချက် - ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ကို အသုံးပြုနေရသော ဒုက္ခိတများအတွက် တွန်းပေးဖို့လူလိုခြင်း (သိုမဟုတ်) ဘက်ထရီအားသွင်းရခြင်းများမှ ကင်းလွတ်၍ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး သွားခြင်ရာ သွားနိုင်တော့မည်
အများ၏ဝေဖန်ချက် - ‘ကောင်းပ့ါဗျာ၊ ဒုက္ခိတပါဆိုမှ ဘယ်က ခြေထောက်နဲ့ သွားနင်းရမှာတုန်း မအေပေးရဲ့’
တီထွင်မှု အမှတ် (၆)
ယခု နောက်ဆုံးတင်ပြလိုသော တီထွင်မှုမှာ ကမ္ဘာမှာ မြန်မာဟေ့လို့ ဝံ့ကြွားနိုင်လောက်အောင်ပင် ထူးခြားဆန်းကျယ်လှပေသည်။
အမည် - Cat-bread Power (ကက်-ဘရက် စွမ်းအင်)
ရည်ရွယ်ချက် - လျှပ်စစ်ဓါတ်အား မလုံလောက်သော မြန်မာနိုင်ငံအတွက်၊ ရေအားမလို၊ ဓါတ်ငွေ့မလို၊ လောင်စာဆီမလိုဘဲ လျှပ်စစ်ဓါတ် ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် နည်းပညာ
အားနည်းချက် - ကမ္ဘာ့တိရိစ္ဆာန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၏ ကန့်ကွက်မှုတော့ ခံရနိုင်သည်
တွေ့ရှိချက် ၁ - ကြောင်ကို အမြင့်မှ ပစ်ချလျှင် မြေကြေီးပေါ်ကို ခြေထောက်နှင့် အရင်ကျသည်။
တွေ့ရှိချက် ၂ - ပေါင်မုန့်ထောပတ်သုတ် လက်ထဲမှလွတ်ကျလျှင် ထောပတ်ရှိသောဘက်မှာ မြေကြီးနှင့်အရင် အပ်မိသည်။
တီထွင်ချက် -အဆိုပါ တွေ့ရှိချက် ၁ နှင့် ၂ ကို ပေါင်းစည်း အသုံးချမည်။
-ကြောင်၏ကျောကုန်းတွင် ပေါင်မုန့်ထောပတ်သုတ်ကို ပူးချည်ကာ အမြင့်တစ်နေရာမှ လွှတ်ချလိုက်မည်။
-ထိုအခါ ကြောင်ကလည်း ခြေထောက်နှင့်အရင်ကျအောင် ကြိုးစားလိမ့်မည်။ ပေါင်မုန့်ထောပတ်သုတ်ကလည်း ထောပတ်မျက်နှာပြင်နှင့် အရင်ကျအောင် ကြိုးစားလိမ့်မည်။
-၎င်းကဲ့သို့ သူ့ထက်ငါ အရင်ကျအောင် အပြန်ပြန်အလှန်လှန်ကြိုးစားမှု (Alternate Action) ဖြစ်ပေါ်လာကာ မြေကြီးနှင့်ထိရန် လက်မအနည်းငယ်အလို လေထဲတွင် ချာလပတ်လည်နေလိမ့်မည်။
-ဤအခြေအနေတွင် ကြောင်၏ဖင်ကို ဝင်ရိုးထိုးကာ၊ ဝင်ရိုး၏ထိပ်တွင် ပင်နယံတပ်၍ ဒိုင်နမိုနှင့်ချိပ်လိုက်လျှင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ရရှိပြီဖြစ်သည်။
-အိမ်သုံးလျှပ်စစ်အတွက် ကြောင်ခပ်သေးသေးတစ်ကောင်နှင့် ရိုးရိုးပေါင်မုန့်ကို အသုံးပြုမည်။
မန္တလေးတောင်လောက်ရှိသော ကြောင်အကြီးကြီးတစ်ကောင်နှင့် အောင်ပင်လယ်လောက်ကျယ်သော ပေါင်မုန့်ထောပတ်သုတ်ရလျှင် အဆင်ပြေပါသည်။
လိုအပ်ချက် - နေပြည်တော်ရှိ တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်မှ အကောင်ဘလောင်များအား မောင်းထုတ်၍ ကြောင်မွေးမြူရေးစခန်း ပြုလုပ်ရန်။
-ဂွတ်မောနင်းပေါင်မုန့်စက်ရုံ နှင့် မန်းတိုင်း သ/မ နို့ချက်စက်ရုံများအား ပြည်သူပိုင်သိမ်းရန်။
အများ၏ဝေဖန်ချက် - ‘ခု မင်းရဲ့ IQ ကို စစ်ဆေးပေမယ့်ဌာနက ရွာသာကြီးကို ပြောင်းသွားပြီ င့ါကောင်ရေ့၊ မှီရာ မြို့ပတ်နဲ့ လိုက်ပေတော့’
credit to Irrawaddy Blog
Post by: ကြောင်ပါး on June 23, 2013, 12:03:35 AM
၆ ပတ်၊ ၆ လ၊ ၆ နှစ်
၆ နှစ် - မင်းကို ငါ မချစ်ရင် အစကတည်းက အားအားယားယား ချစ်ခွင့်တောင်းမလားဟ။
၆ ပတ် - အချစ်ရေ၊ မင်းဒီလက်စွပ်လေး သဘောကျလိမ့်မယ်လို. မျှော်လင့်တယ်။
၆ လ - ပန်းချီးကား တချပ်ဝယ်လာတယ်၊ ဧည့်ခန်းမှာထားရင် အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်။
၆ နှစ် - ရော့ ပိုက်ဆံ။ နင့်ဖာသာ ကြိုက်တာသွားဝယ်။
၆ လ - ရော့၊ နင့်ဖုန်း။
၆ နှစ် - နင့်ဖုန်းမြည်နေတယ်၊ မြန်မြန်လာကိုင်။
၆ ပတ် - မင်းဒီလောက် ဟင်းချက်ကောင်းလိမ့်လို. မထင်ခဲ့ဘူးကွာ။
၆ ပတ် - ငပလီကို ၁ပတ်လောက် အပန်းဖြေခရီးသွားရအောင်လေ၊ တခြားဘယ်နေရာ သွားရင်ကောင်းမလဲ။အကြံပေးပါဦး။
၆ နှစ် - ဘာ!! ခရီးသွားဦး မယ်။ အိမ်မှာနေရတာ ဘာပြုနေလို. အားတိုင်း ထွက်ချင်နေရတာလဲ။
၆ ပတ် - ကနေ.ည ဘာကားကြည့်ချင်လဲ အချစ်။
၆ နှစ် - ငါကနေ.ည ESPN လိုင်းကြည့်မှာ၊ မကြည့် ချင် ရင်စောစောသွားအိပ်
Post by: ရွာဆော်ကြီး on July 08, 2013, 10:42:16 PM
"ဟင်.ဒါဆို ဟိုတစ်ပတ်က ပါလာတဲ့ ယောက်ျားက
Post by: ရွာဆော်ကြီး on July 08, 2013, 10:43:00 PM
" ခင်ဗျား အခု ခုန်ချရင်ခုန်ချ၊
Post by: ရွာဆော်ကြီး on July 08, 2013, 10:43:52 PM
အဖမ်းခံရသတဲ့။ ရုံးတင်စစ်ဆေးပြီးနောက် တရားသူကြီးက
Post by: ရွာဆော်ကြီး on July 08, 2013, 10:45:03 PM
လူတစ်ယောက်ဟာ သေပြီး နတ်ပြည်ရောက်သွားခဲ့တယ်။
နတ်သားတစ်ဦးက သူ့ကိုဦးဆောင်ပြီး နတ်ပြည်အနှံ့
လိုက်ပြခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးမှာ နာရီအပြည့်ချိတ်ထားတဲ့
အခန်းတစ်ခုကို ရောက်သွားခဲ့တယ်။ အခန်းထဲမှာရှိတဲ့ နာရီတစ်ချို့က
အလုပ်လုပ်နေပြီး၊ တစ်ချို့က ရပ်နေတယ်။ နတ်သားက "ဒီနာရီတွေက
လူ့ပြည်မှာရှိတဲ့ လူတွေရဲ့ ကိုယ်စားပြု နာရီတွေဖြစ်တယ်။ ခင်ဗျားနာရီလည်း
ဒီထဲမှာရှိတယ်" လို့ ရှင်းပြတယ်။
နာရီတစ်ချို့က မြန်လိုက်၊ နှေးလိုက် ဖြစ်နေတာကို တွေ့တော့ နတ်သားက "
လူတစ်ချို့ မုသားစကားပြောနေတဲ့ အချိန်မှာ သူ့ကိုယ်စားပြု နာရီက
အရမ်းမြန်နေတတ်တယ်" လို့ ထပ်ရှင်းပြတယ်။
နတ်သားရှင်းပြတာကို ကြားတော့ သူက စိတ်ဝင်တစား "ဒါဆို
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲရဲ့ နာရီမရှိဘူးလား ကျွန်တော့်ကို
ခဏပြလို့ရမလား" လို့ တောင်းဆိုလိုက်တယ်။
နတ်သားပြန်ဖြေလိုက်တာက "ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခဏနေမှကြည့်လို့ရမယ်။
နတ်မင်းကြီးက ပူလို့ဆိုပြီး အဲဒီနာရီကို ပန်ကာလုပ်ဖို့ ယူသွားလို့ပါ။
Post by: ကြောင်ပါး on July 11, 2013, 10:31:50 AM
ဆိုင်ရောက်တော့ အရောင်းစာရေးမက ....
အမျိုးသားက နားမလည်တော့ .....
လျှော့ရဲရဲဖြစ်နေရင် ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့ ဘရာစီယာပါ.....။
အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်ပြတဲ့ ဘရာစီယာပါ.......။
မရှိမဲ့ရှိမဲ့ အရာတွေကို တဆိတ်တအိတ် လုပ်ပြီး ......
ထုတ်ပြတဲ့ ဘရာစီယာပါ တဲ့........။
အဲဒါနဲ့ အမျိုးသားက .......
အရင်းရှင်တစ်ထည် ၀ယ်သွားသတဲ့ကွယ်.... ။
ငိငိ.... ဒချိ ဒချိ.......။
( credit - ဥက္ကာကိုကို )
Post by: ရုက္ခစိုး on July 20, 2013, 11:12:17 PM
ဖြိုးကြီးသည် အရက်ဖြတ်ရန် ဘုရားကျောင်းသို့သွားသည်။ တစ်လခန့် အရက်ကို ကြိုးစားဖြတ်ပြီးနောက် ဘုန်းတော်ကြီးက ဖြိုးကြီးအား ရေထဲတွင် ၃ ကြိမ်နှစ်၍
"ကဲ မောင်ဖြိုးကြီး မင်း အရက်လဲပြတ်သွားပြီ အပြစ်တွေ အားလုံး မရှိတော့ဘူး ဒီနေ့ကစပြီး လူသစ်စိတ်သစ်နဲ့ ဘဝသစ်ပြန်စတော့ နာမည်အသစ်ပါပြောင်းပေးလိုက်မယ် မင်းနာမည် ဒိတ်ဒိတ်ကျဲ ဖြစ်သွားပြီ "
သို့နှင့် ဒိတ်ဒိတ်ကျဲ အိမ်ပြန်ရောက်လာသည်။ ရေခဲသေတ္တာကို ဖွင့်လိုက်သည်။ ရေခဲ ပွင့်လေးများတွဲခိုနေသော ဘီယာဗူးလေးများက စီရရီရှိနေကြသည်။
ဒိတ်ဒိတ်ကျဲ အံကို ကျိတ်လျက် ဘီယာတစ်ဗူးယူလိုက်ပြီး ရေဇလုံထဲသို့ ၃ ကြိမ်နှစ်လိုက်သည်။
"ကဲ မင်းလဲ နာမည်ပြောင်းလိုက်တော့ မင်းနာမည် ဘီယာမဟုတ်တော့ဘူး လ်ိမ္မော်ရည်ဖြစ်သွားပြီ "
ဟုဆိုပြီး ... ဖောက် .. ရှူး .. ဂလု ဂလု ..
Credit to; Ye Khaung
်f.b က ရတာတွေ ပါ။
Post by: ရုက္ခစိုး on July 21, 2013, 12:01:14 AM
မော်စကိုမြို့စွန်ရှိ ဘားတခုတွင် လူတယောက်ဘီယာထိုင်သောက်နေသည်။ မယ်သီလရင်တယောက် လမ်းလျှောက်လာသည်။ ထိုလူရှေ.တွင်ရပ်လိုက်ပြီး ပြစ်တင်ရှုံ.ချသောလေသံဖြင့် ပြောသည်။
"လမ်းမှားရောက်နေတဲ.သူတွေ၊ သူခိုးဂျပိုးတွေ ကျက်စားတဲ့ နေရာမှာမှ ရှင်မို့ အချိန်လာဖြုန်းနေတယ်။"
"ဒီမှာ ထိုင်ပြီး ဘီယာလာသောက်တာနဲ. မကောင်းဘူးလို့ ပြောလို့မရပါဘူး စစ္စတာရယ်၊ ကျွန်တော်က အေးအေးဆေးဆေး ဘီယာပဲထိုင်သောက်နေတာပါ။"
"ဒါပေမဲ. အရက်သေစာသောက်တာ ဘုရားသခင် မကြိုက်ဘူး"
"ဘယ်တော့မှ မသောက်ဘူး" ဒေါသသံနှင့် စစ္စတာအန်နာ ပြန်ပြောသည်။
"မသောက်ကြည့်ပဲနဲ. မကောင်းတဲ.အလုပ်လို. ဘယ်လိုပြောလို. ရမှာလဲ၊ လာပါ တခွက်လောက် သောက်လိုက်၊ ကျွန်တော် တိုက်ပါ့မယ်။"
"ဟင့်အင်း,ဘာလဲ မယ်သိလရှင် ဘီယာသောက်တာကို လူတွေမြင်စေချင်လို.လား?"
"ဪ,ဒီအတွက် စိတ်မပူပါနဲ.၊ဘီယာသောက်တာမသိအောင် ကော်ဖီခွက်ထဲ ထည်.တိုက်မယ်လေ၊ ဘယ်လိုလဲ?"
ခက်ခက်ခဲခဲ ဆုံးဖြတ်ရဟန်ဖြင့် စစ္စတာအန်နာ ခေါင်းငြိမ့်သည်။
ဘားကောင်တာဘက်သို့ လျှောက်သွားသည်။ ကောင်တာမှ ဘားမင်းကို အော်ဒါပေးလိုက်သည်။
"ဘီယာ၂ခွက်ထည့်ပေးပါ။ တခွက်က ကော်ဖီခွက်နဲ့ ဖြစ်ပါစေ"
ဘားမင်း ခေါင်းမော့ပြီး ပြန်မေးသည်။
"ဘာလဲ၊ စစ္စတာအန်နာ ရောက်နေပြီလား...?"
Post by: ရုက္ခစိုး on July 21, 2013, 09:14:33 PM
အလုပ် အင်တာဗျူး တစ်ခုတွင် ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ ပိုင်ရှင်သူဌေးကြီး ဦးပွ တစ်ယောက် အတွင်းရေးမှူး အသစ်ခန့်ရန် အတွက် အင်တာဗျူးနေလေသည်။ ပထမဆုံး တစ်ယောက်စ၀င်လာလေသည်။
“ ငင် နတ်ကတော်က ဒီကို ဘာလာလုပ်တာတုန်း”
“ အို သူတို့ပဲ အတွင်းရေးမှူး အလိုရှိသည်ဆိုလို့ လာတာပဲဟာကို ဟွန့်”
“ အွန် ဟုတ်ပါပြီ ဟုတ်ပါပြီ ပညာအရည်အချင်းနဲ့ ရခဲ့တဲ့ ဘွဲ့လေးတွေ တစ်ချက် ပြောပါအုံး”
“ ရေကျော်မှာ အသေပျော် မင်္ဂလာဒုံမှာ ဖင်ခါတုန် မြေနီကုန်းမှာ အသေအပီကြုံး လမ်းမတော်မှာ နှုတ်ခမ်းထော် ဥက္ကလာမှာ ဆပ်စလူးခါ ရွှေပြည်သာမှာ နေခြည်ဖြာ ဘောက်ထော်မှာ အခြောက်ကျော် ဥက္ကံမှာ မဟုတ်မခံ ဒဂုံတောင်မှာ လုံချည်ပေါင် ရွာသာကြီးမှာ ခါလာကြီး သုံးခွမှာ တစ်ဆုံးရွ ကျောက်တန်းမှာ အခြောက်ကြမ်း စတဲ့ဘွဲ့တွေ ရခဲ့ပါတယ်ရှင်”
“ အလို ဘုရားဘုရား နဲတဲ့ ဘွဲ့တွေလား”
“ အဟင်း ဒါတောင် တချို့ဟာတွေ မေ့နေလို့”
“ ငင် ကျန်သေးတာလား ဟုတ်ပါပြီ ဟုတ်ပါပြီ ဒီအလုပ်လာလျှောက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်က”
“ သူဌေးကတော် ဖြစ်ချင်လို့”
“ ငင် နင့်ဟာက ကတော်တွေချည်းပါပဲလား အစတုန်းက နတ်ကတော် အခုတော့ သူဌေးကတော် အမငီး”
“ သမီးက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတတ်လို့ပါချင်”
“ ဟုတ်ပါပြီ ဟုတ်ပါပြီ ဒါဆို ဗဟုသုတမေးခွန်းလေးမေးကြည့်ရအောင် ဟိုတလောက မြန်မာပြည်ကိုလာတဲ့ အမေရိကန် သမ္မတ နာမည်လေး ပြောပါအုံး”
“ ငင် အဲ့ဒါ မြန်မာအဆိုတော်နာမည်ကြီးလေ ဒါဆို သမ္မတ စီးခဲ့တဲ့လေယာဉ်မှာ နာမည်ရှိတယ် သိလား“
“ ငွန့် ဘာလို့အဲ့လောက်တော်ရလဲ သမီးရယ်”
“ ငွင် ဟုတ်လား ဟုတ်ပါပြီ ဒါဆို နောက်ဆုံး တစ်ခု အနေနဲ့ သမီးဘ၀မှာ လက်ကိုင်ထားတဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေးရှိရင် ပြောပြပါလား”
“ သဘောကောင်းတယ် သွားကြားထိုးပက်စက်တယ်”
“ ငင် ဘီလိုကြီးတုန်း ရပါပြီ သမီးရယ် ရပါပြီ အလုပ်ခန့် ဖြစ်ရင် အကြောင်းကြားလိုက်ပါ့မယ်ညော် ကဲ နောက်တစ်ယောက်ခေါ်ပါဟေ့”
“ အမယ် ဇာတ်မင်းသားလား ဘာအလုပ်လုပ်လဲ”
“ ဖွီး ဘာကြီးတုန်း တစ်ခါမှ မကြားဖူးပါလား”
“ နတ်ကတော်တွေ နတ်ကန္နားပေးလို့ နတ်ကနေတုန်း သူ့ကိုယ်ပေါ်ကအောက်ပြုတ်ကျလာတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို ပြေးဆွဲတာလေ”
“ တယ်ကောင်းတဲ့ အလုပ်ပါလား ပညာအရည်အချင်းနဲ့ ဘွဲ့လေးပြောပြပါအုံး”
“ မျှော်တော်ယောင်မိုခ “
“ အော် မျှော်တော်ယောင်သီချင်းဆိုလွန်းလို့လား”
“ မဟုတ်ဘူး ပိုက်ဆံ ပြုတ်ကျလာတာကို မျှော်ရလွန်းလို့ ကျန်သေးတယ် ဇာဘော်လီမိုခ”
“ ငင် ဇာဘော်လီရောင်းလို့လား”
“ မဟုတ်ဘူး ပိုက်ဆံ ပြုတ်မကျလာလို့ စိတ်မရှည်ဘဲ နတ်ကတော်ရင်ဘတ်က ချိတ်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံပြေးလုတာ ဇာဘော်လီကြီးပါ ပါလာလို့”
“ အင်း လူစွမ်းကောင်းပေပဲ”
“ ကျန်သေးတယ် ဗုံးမိုခ”
“ ဘုရား ဘုရား သောင်းကျန်းသူ အဖွဲ့ကလားငင်”
“ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ ၀မ်းခဏ ခဏ ချုပ်လွန်းလို့ ၀မ်းချူဗုံး ထည့်ရလွန်းလို့ပါ”
“ ငင် ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒါဆို ဗဟုသုတ မေးခွန်းလေးမေးရအောင် ဟိုတလောက ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းထဲမှာ ပြဿနာတက်တဲ့ မင်းသားကိုသိလား”
“ ငင် အဲ့လိုကြီးတော့ မဟုတ်သေးဘူးလေ အဲ့ဒါက အရင်ခေတ်က မြို့ရိုးတွေမှာ ရှိတဲ့ဟာ အခုဟာက တစ်လုံးမှန်တယ် စဉ်းစားကြည့်ပါအုံး”
“ မဟုတ်သေးဘူး အဲ့လိုပဲ အဆောက်အအုံ အကြီးကြီးလေ”
“ ကန်ထရိုက်တိုက် လား မဟုတ်သေးဘူး အုတ်တိုက် အီး”
“ အဲ နီးစပ်လာပြီ နီးစပ်လာပြီ”
“ ရေခဲတိုက် လား”
“ ငင် ဒီလောက်ဆိုရပါပြီ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ လက်ကိုင်ထားတဲ့ဆောင်ပုဒ်လေးရှိရင် ပြောပြပါအုံး”
“ ငင် ဒါကြီးက ဆောင်ပုဒ်လား”
“ ဟုတ်တယ်လေ ဒါမှ ပိုက်ဆံကျလာရင် အတော်ဖြစ်မှာ”
“ ငွန့် ကဲ နောက်တစ်ယောက်သွင်းပါဟေ့”
“ ငင် လုပ်ပြန်ပြီ အဲ့ဒါ ဘာအလုပ်ကြီးတုန်း”
“ အော် ကုန်ထမ်းတဲ့ကူလီတွေ ညောင်းလာရင် ဇက်ကြောဆွဲပေးတာပါ အမယ် အထင်မသေးနဲ့ ကိုက်တယ်နော်”
“ ဟုတ်လား ဒါနဲ့ ဘာဘွဲ့တွေ ရဖူးတုန်းဗျ”
“ ပထ၀ီ ဂုဏ်ထူးထွက်တယ်ပေါ့လေ”
“ မဟုတ်ဘူး ပထ၀ီကြော ကိုင်တာ ကျွမ်းလို့တဲ့မယုံရင် ကိုင်ပြမယ် မှောက်လိုက်”
“ ဟုတ်ကဲ့ မှောက်ပြီ ငင် မဟုတ်သေးပါဘူး ဘာလို့မှောက်ရမှာလဲ”
“ မယုံမှာ စိုးလို့ပါဗျာ”
“ ထားပါတော့ ထားပါတော့ ဗဟုသုတလေးမေးရအောင် ကိုလိုနီ လက်အောက်မရောက်ခင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နောက်ဆုံး မင်းက ဘယ်သူလဲဗျ”
“ နေမင်း “
“ ငင် အဲ့ဒါက မင်းသားကြီးလေ အဲ့မင်းနာမည်က ရှမ်းပြည်က မြို့တစ်မြို့နာမည်လေ”
“ ငင် မဟုတ်ဘူး အောက်နဲနဲ ဆက်ဆင်း”
“ အာ အဲ့လိုပြောတာ မဟုတ်ဘူးလေ မြို့ကို အောက်နဲနဲ ဆက်ဆင်းလို့ပြောတာ”
“ လောက်ကိုင်မင်း တာချီလိတ်မင်း “
“ အဟင့် အဲ့မင်းတွေ ဘယ်တုန်းက တက်သွားမှန်းတောင် မသိလိုက်ရပါလား”
“ အော် သိပြီ သိပြီ”
“ ဟေ ဟုတ်လား ပြောလိုက်စမ်း ရဲရဲကြီး”
“ ငင် အဲ့ဒါက ကားလိုင်းနာမည်ကြီးလေ ရပါပြီ ရပါပြီ နောက်ဆုံး အနေနဲ့ လက်ကိုင်ထားတဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေးပြောပြပါလား”
“ တစ်မျိုးသားလုံး၏ စိတ်ဓါတ်နှင့် အကျင့်စာရိတ္တမြင့်မားရေး”
“ ငင် အမလေး ငါ့ကို သွေးကျဆေး သွေးကျဆေးပေးကြပါ”
“ ဆရာ ဆရာ ဆရာ”
ခရက်ဒစ် ဘိုင် ကိုပွ ဖေ့(စ်)ဘွတ်(ခ) ;) ;) ;)
Post by: kolugyi on August 21, 2013, 02:13:08 PM
ဟဲ့ကောင်မ လင်ခိုးမ ကြာကူလီမ ထွက်ခဲ့စမ်းးးး
အောင်မာ ငါ့အိမ်ရှေ့လာပြီး အော်ကြီးဟစ်ကျယ်နဲ့ သောက်ရှက်မရှိဘူလား အပေါက်ချောင်မရဲ့
ဟဲ့ ငါ့ဖာသာ အပေါက်ချောင်ရုံမကလို့ နှစ်ခြမ်းကွဲကွဲ နင့်လို အပေါက်မသရမ်းဘူး လင်ခိုးမရဲ့
နင့်လင်ကို ခိုးထားတာ မဟုတ်ဘူး ဟေ့ အဝင်အထွက်မတူလို့ ကြင်ဖက်ကို ပစ်ပယ်ပြီး ဟော့ဒီ (ရင်ဖက်ကို တဘုန်းဘုန်းလက်နဲ့ရိုက်) ကောင်မဆီ နင့်လင် လာငတ်နေတာ ……ရှင်းလားး
ဟဲ့ အဝင်အထွက်မတူရအောင် နင်က ဖင်နဲ့ပါဧည့်ခံ ပေးလိုက်လို့လားး ကျက်သတုံးမရဲ့ ဟင်းးး အိမ်က သေနာကောင်ဟာလည်း ကတ်ကြေးနဲ့ဖြတ်ပြီး ခွေးကျွေးပစ်တောင် နင်က ခွေးနဲ့အပြိုင် ဝင်ဆွဲချင် ဆွဲနေဦးမှာ ဟစ်ဟစ်
တော်ကြပါတော့ဟာ ရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ (ရပ်ကွက်လူကြီး)
ရပ်ကွက်လူကြီး အာ့ကောင်မကို ကျမ ယောင်္ကျားနဲ့ ဆက် မပက်သက်ဖို့ ပြောပေးစမ်းပါ ကျမ လူလို ပြောနေတာကို ဒင်းက နားမလည်ဘူး
ဟ နင်က လူလိုပြောလို့ သူက နားမလည်တော့ ငါက ခွေးလို သွားပြောရမှာလားးး
ရှင် အာ့လို မဟုတ်ပါဘူးလူကြီးရယ် အထင်မလွဲပါနဲ့ကန်တော့ ကန်တော့
ဟေ့ ဒီမှာ မအဝှာ ခင်များကြောင့် သူများ အိမ်ထောင်ရေး ပြသနာ တက်အောင် တော့ မလုပ်နဲ့လေဗျာ ဆင်ဆင်ခြင်ခြင်နေမှပေါ့ဗျာ
အော် ရှင်က ခုမှ ဆင်ခြင်မှပေါ့ ဟတ်လား ရှင် ကျမဆီ လာသရမ်းတုန်းက အာ့ ပါးစပ်က တအားအားနဲ့ ဒီလိုမှန်းသိ အာ့ ပါးစပ်ထဲ ခုံဖိနပ် ချီးသုတ်ပြီး ထည့်ပလိုက်တယ် ထွီ
အော် ရပ်ကွက်လူကြီး ရှင်ကပါ ဒီကောင်မနဲ့ #$&#&***&*#**#-@--@*&&#*#*#**&$*--#--*$:***@*@*&
အာ့လိုနဲ့ နှောင်ချိန်ပလေးကုန်ကြရောဗျာ အာ့ ဟိုတနေက ရက်ကွက်တစ်ခုက ဇာတ်လမ်း ကြားသလောက်လေး ရေးပေးတာ စကားလုံးတွေ ကြမ်းရင် သည်းခံပါဗျာ
Post by: နိုးတူး on August 30, 2013, 10:29:25 AM
လင်မယား နှစ်ယောက် ညဘက်အိပ်ပျော်နေတုန်း အောက်ထပ် တံခါးကို ဖွင့်သံကြားတယ်။
မိန်းမက ရုတ်တရက်လန့်နိုးလာပြီး ဘေးမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့ယောက်ျားကို အလန့်တကြားပြောတယ်
”သွားသွား မြန်မြန်ပြေးတော့.. ကျမ ယောက်ျား ပြန်လာပြီ”
ယောက်ျားလည်း မပြောမဆိုနဲ့ အိပ်ခန်းပြတင်းပေါက်ကနေ ဝုန်းကနဲ ခုန်ဆင်းပြေးတယ်။
နောက်မှ.. ဖုန်အလူးလူးနဲ့ အိမ်ရှေ့တံခါးကနေ ပြန်ဝင်လာရင်း မိန်းမကို ဒေါသတကြီးပြောတယ်
”ကျမယောက်ျား ပြန်လာပြီ ပြေးပြေး လို့ပြောရအောင် ငါက မင်းယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလား.. မိန်းမယုတ် ဖောက်ပြန်နေတယ်”
”ပြေးဆိုတာနဲ့ ရှင်ကရော ဘာလို့ ကမူးရှူးထိုး ထ ပြေးသလဲ။ အယုတ်တမာကောင်”
Credit To > FB
Post by: ကြောင်ပါး on September 05, 2013, 03:45:21 PM
တစ်ခါက သားအဖနှစ်ယောက်စကားပြောဝိုင်းတွင် အဖေလုပ်သူက သားကိုပြောသည် ။
အဖေ ။ ။ သား အဲ့ဒီမိန်းခလေးကို ယူကိုယူရမယ် ။
သား ။ ။ ဟာ အဖေကလည်းဗျာ သူကအပျိုမှမဟုတ်တာဗျ ။
အဖေ ။ ။ သြော်သားရယ် သူလည်းတစ်ချိန်က အပျိုပါသားရယ်...ယူလိုက်ပါကွာ.. ။
အဖေ ။ ။ သား မင်းရဲ့ ဟင်းတွေကလည်း ဝါးတွေကိုချက်ထားတာပါလား .....
စားလို့မှမရတာ သားရယ် ။
သား ။ ။ သြော် အဖေရယ် သူလည်းတစ်ချိန်က မျှစ်ပါ အဖေရယ်..စားလိုက်ပါနော်
credit : http://www.pauksa.net/
Post by: ၀င်း on September 08, 2013, 02:05:42 AM
"ဗာတီကန်စီးတီးကို သွားပြီး ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးကို ဖူးဖို့ပါ"
ဒီလိုနဲ့ နောက်တစ်လလောက်ကြာတော့ အဲဒီလူနဲ့ ဆံသဆရာ ကော်ဖီဆိုင်မှာ တွေ့ကြတယ်။
"IAI ကလဲ အချိန်အတိအကျ ပျံတယ်၊ လေယာဉ်မယ်လေးတွေလည်း ငယ်ငယ်ချောချောလေးတွေ"
"Swan ဟိုတယ်လည်း ပြင်ဆင်မွမ်းမံထားတော့ အခန်းတွေလဲကျယ်၊ ဝန်ဆောင်မှုလဲကောင်း၊ ဈေးလဲချိုတယ်"
"မဟုတ်ဘူးဗျ၊ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးက တနေ့ကို လူတစ်ရာရွေးပြီး တဦးချင်း ဖူးတွေ့ခံတယ်"
"ဟုတ်တယ်၊ ကျနော်ကံကောင်းတယ်၊ သူ့ကို တဦးချင်း အနီးကပ် ဖူးခဲ့ရတယ်"
Post by: ကြောင်ပါး on September 10, 2013, 01:11:23 PM
မောင်ကျေးညိုလေး မနေ့က ကျောင်းပျက်လို့ ဆရာမက စစ်ဆေးနေတယ်... ...
"မင်း... မနေ့က ဘာလို့ ကျောင်းပျက်တာလဲ"
"ကျနော်တို့က မွေးမြူရေးလုပ်ပါတယ် ဆရာမ"
"မနေ့က အိမ်ကနွားမကြီး ဇီးတင်ဖို့ ရှိပါတယ်"
"အဲဒါနဲ့ ဟိုဘက်ရွာမှာ နွားသိုးသွားဆွဲဖို့ ကျနော့်ကို အဖေကခိုင်းလို့ပါ"
"ဟဲ့... အဲဒါ မင်းအဖေ သူ့ဟာသူ လုပ်လို့ရရဲ့သားနဲ့"
"ဟာ... အဖေနဲ့မရဘူး ဆရာမ၊ နွားသိုးနဲ့မှ ရတာ"
Post by: နိုးတူး on September 13, 2013, 12:22:30 PM
မကြာမှီ ရန်ကုန်လေဆိပ်ကို လေယာဉ်ဆင်းတော့မယ်
အင်တာကွန်းကနေပြီး လေယာဉ်မှူးက နုတ်ဆက်စကားပြောတယ်...
"ခရီးသည်အားလုံး မင်္ဂလာပါ၊ ကျနော် ကပ္ပတိန်ဇော်နူပါ၊ မကြာမှီ မင်္ဂလာဒုံကွင်းကို ဆင်းသက်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ကျနော်တို့ရဲ့ ပုဇဉ်းရင်ကွဲ လေကြောင်းလိုင်းကို အားပေးစီးနင်းတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်"
ပြသနာက နုတ်ဆက်စကားပြောပြီးပေမယ့် မိုက်ကရိုဖုန်းခလုပ်ကို ပြန်မပိတ်မိဘူး
ဒီတော့ လေယာဉ်မောင်းခန်းက ပြောသမျှ ခရီးသည်အားလုံး ကြားနေရတယ်
လေယာဉ်မှူးက တွဲဖက်လေယာဉ်မှူးကို မေးနေတာ... ...
"ဟကောင်ကြီး ရန်ကုန်မှာ ဘာတွေလုပ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိလဲကွ"
"လောလောဆယ် ဗိုက်အရမ်းနာနေတော့ ဟိုတယ်ကိုပြေးပြီး အိမ်သာတက်မယ် ဆရာ၊ ပြီးမှ ရေမိုးချိုးမယ်"
"ပြီးတော့... ခု ပါလာတဲ့ ဟို လုံးကြီးပေါက်လှလေယာဉ်မယ်ကို အခန်းလာဖို့ ချိန်းထားတယ် ဆရာ၊ အဲဒါ သူရောက်လာတာနဲ့ တညလုံးဘေမယ် ဆရာရေ့"
ခရီးသည်တွေက ပြုံးစိစိနဲ့ လေယာဉ်မယ်ကို ဝိုင်းကြည့်ကြတယ်
ဒါနဲ့ လေယာဉ်မယ်လည်း မဖြစ်ချေဘူး မိုက်ပိတ်ဖို့ သွားပြောမှ ဆိုပြီး ခေါင်ခန်းဆီပြေးသွားတယ်...
ဖြစ်ချင်တော့ လျှောက်လမ်းမှာ မှောက်လျှက်လဲပါလေရော
ဘေးခုံမှာ ထိုင်နေတဲ့ အဖွားကြီးတစ်ယောက်က ဆွဲထူပေးရင်း ပြောတယ်... ...
"ဖြေးဖြေးသွား သမီး၊ အချိန်ရပါသေးတယ်၊ သူအိမ်သာတက်ပြီး ရေချိုးအုံးမှာပါ"... တဲ့
Post by: နိုးတူး on September 19, 2013, 01:44:10 PM
သတင်းထောက်အသစ်လေးတစ်ယောက်ဟာ ယာဉ်တိုက်မှုသတင်းတစ်ခု ရလာပါတယ်
ဒါနဲ့ အဲဒီသတင်းကိုရေးပြီး အယ်ဒီတာဆီ တင်လိုက်တယ်
"... အဆိုပါ ယာဉ်တိုက်မှုတွင် အဆိုတော်မလေး၏ နို့တွင် ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာ ရသွားသည်" ... ဆိုတဲ့ အပိုဒ်က ပြသနာဖြစ်နေရော
"နို့ ဆိုတဲ့အသုံးဟာ ရိုင်းစိုင်းတယ်ကွ ပြင်ရေးစမ်း"
ခဏနေတော့ ပြင်ရေးထားတာ လာပေးတယ်...
"... ... အဆိုတော်မလေး၏ ရင်သားတွင် ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာ ရသွားသည်" တဲ့
"ရင်သား လို့ ရေးတာလည်း ရိုင်းစိုင်းတာပဲကွ ပြန်ပြင်ရေး"
ဒါနဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး အကြံတောင်းကြည့်တော့ ဟိုဖက်က ပြန်ပြောတယ်...
"လွယ်လွယ်လေး ဟေ့ကောင်၊ ငါက ဖေ့စ်ဘုတ်နေ့တိုင်း သုံးတယ်၊ ဒို့ ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ ဆဲတာတောင် ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ဆဲလို့ရတယ်၊ မင်း ရင်သားလောက်တော့ အပျော့၊ ဒီလိုရေး # @ $ & "
ဒါနဲ့ သူငယ်ချင်းပြောတဲ့အတိုင်း ရေးလိုက်ပြီး အယ်ဒီတာကို ပေးလိုက်တာ
အယ်ဒီတာခမျာ ဖတ်ကြည့်ပြီး မျက်လုံးပြဲသွားရှာတယ်...
"... အဆိုတော်မလေး၏ ( . )( . ) တွင် ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာ ရသွားသည်" တဲ့
Post by: နိုးတူး on September 22, 2013, 12:49:12 PM
ထက်မြက်သော ကယ်တင်ရှင် လွှတ်တော်အမတ်
လေ့လာရေးခရီး ထွက်လာတဲ့ လေယာဉ်လေးတစ်စီးပေါ်မှာ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးရယ်၊ ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်ရယ်၊ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရယ်၊ လွှတ်တော်အမတ်တစ်ဦးရယ် ပါလာတယ်။
ပျံသန်းနေရင်း လမ်းခုလတ်မှာ လေယာဉ်မှူးက ပြောတယ်.... ...
"ခရီးသည်အားလုံး နားထောင်ပါ၊ ကျနော်တို့လေယာဉ်ဟာ အင်ဂျင်ချွတ်ယွင်းသွားပါပြီ၊ မကြာခင်ပျက်ကြပါတော့မယ်"
"ဟာ... ဘုရား ဘုရား ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ"
လေယာဉ်မှူးက ဆက်ပြောတယ်... ...
"ဒီလေယာဉ်ပေါ်မှာ လူငါးယောက်ပါတယ်၊ လေထီးက လေးခုထဲ ရှိတာ၊ တစ်ယောက်ယောက်တော့ အနစ်နာခံရလိမ့်မယ်၊ ကျနော်က လေယာဉ်မောင်းတဲ့လူဆိုတော့ လေထီးတစ်ခုယူမယ်၊ သွားပြီဗျို့"
... ဆိုပြီး လေထီးအိတ်တခုကို လွယ်လို့ ခုန်ချသွားတယ်
ကျောင်းသားလေးက ပြောတယ်... ...
"ကျနော်က လူ့ဘဝကိုရောက်တာ မကြာသေးဘူး၊ ဆက်အသက်ရှင်ချင်သေးတယ်၊ ကျနော်လည်း လေထီးတခုယူမယ်၊ သွားပြီဗျို့"
လွှတ်တော်အမတ်က ပြောတယ်... ...
"ကျနော်က တိုင်းပြည်ကိုဦးဆောင်နေရတဲ့ အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်၊ တိုင်းပြည်ကို ကယ်တင်ဖို့ ကျနော်တို့လို ထက်မြက်ထူးချွန်တဲ့ လူတွေလိုတယ်၊ လေးထီးတခုယူမယ်၊ သွားပြီဗျို့"
ဆရာဝန်က ဘုန်းတော်ကြီးကို လေထီးအိတ်တခု လာပေးတယ်
ဘုန်းတော်ကြီးက ပြောတယ်... ...
"ဒီနောက်ဆုံးကျန်တဲ့ လေထီးကို တကာကြီးယူပါ၊ ဘုန်းဘုန်းက အသက်လည်းကြီးပါပြီ။ သတ္တဝါအားလုံး အေးချမ်းကြပါစေ"
"ဒီလေထီးကို ဘုန်းဘုန်းယူပါ၊ နောက်တခုကျန်ပါသေးတယ်"
"ဟင်... ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ကျန်ရတာလဲ"
ဒီတော့ ဆရာဝန်က ပြန်ပြောတယ်.. ...
"ခုနက နိုင်ငံတော်ကိုကယ်တင်မယ့် ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက တပည့်တော်ရဲ့ဆေးအိတ်ကို လေထီးအိတ်မှတ်လို့ ယူသွားလေရဲ့"
Post by: ကြောင်ပါး on October 02, 2013, 10:07:50 AM
ညောင်လေးပင် မြို့တွင် နှစ်ပိသာ အလေးချိန်ရှိသော ကြက်ဥကို ကြက်မတစ်ကောင်က ဥ လိုက်လေ၏။
ထိုသတင်းသည် ရွာနီးချုပ်စပ်မှတဆင့် ပျံနှံသွား၏။
မီဒီယာခေတ်ဖြစ်သည်နဲ့အညီ မြန်မာ သတင်းထောက်များလည်း ရောက်လာပီး ကြက်မ ကို အင်တာဗျူး လုပ်လေတော့၏။
သတင်းထောက်။ ။ဘယ်လိုနည်း နဲ့ ဒီလောက်ကြီး တဲ့ ဥ ကို ဥနိုင်တာပါလဲဗျာ။
ကြက်မ ။ ။ဒါ လှို့ဝှက်ချက်ရှင့် ။
သတင်းထောက်။ ။အော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါနဲ့ အနာဂတ် မှာရော ဘယ်လို ရည်ရွယ်ထားပါသလဲဗျာ။
ကြက်မ ။ ။ငါး ပိသာလေးတဲ့ ဥ ကို ဥ ပါမယ်ရှင်။
ထို့နောက် သတင်းထောက်များလဲ ဖခင်ဖြစ်သော ကြက်ဖ ကိုဆက်ပီးဗျူးကြ၏။
သတင်းထောက်။ ။ဒီလို အံ့ဖွယ် ကိစ္စ ကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဖန်တီးလိုက်တာပါလဲဗျာ။
ကြက်ဖ ။ ။ဒါ လှို့ဝှက်ချက်ပါ။
သတင်းထောက်။ ။အနာဂတ် ရည်ရွယ်ချက်လေး သိပါရစေ ။
ကြက်ဖ ။ ။ငှက်ကုလားအုတ်ကို....လက်သီးနဲ့ ထိုးမယ်။ဒါဟာ ကျုပ်ရဲ့ တခုတည်းသော ရည်မှန်းချက်ပဲ။
ကိုလုံ( Lon Ely )
မေ့ဆေးပေးခွဲစိပ်မှုကို ခံထားရတဲ့ ယောက်ျားဖြစ်သူဟာ လူနာကုတင်ပေါ်မှာ မေ့မြောနေဆဲ ရှိပါသေးတယ်။
သူ့ကုတင်ဘေးမှာတော့ မိန်းမဖြစ်သူက ထိုင်စောင့်နေတယ်။
မျက်လုံးလေး ပုတ်ခပ်ပုတ်ခပ်လုပ်ကြည့်ပြီး သူ့မိန်းမကို မြင်သွားတော့… …
မိန်းမဖြစ်သူလည်း တော်တော်လေး ကျေနပ်အံ့သြသွားတယ်၊
သူတို့ ပေါင်းသင်းလာတာကြာပြီ၊ တခါမှ အဲလိုချီးမွမ်း မခံရဖူးဘူးလေ။
ခုနလိုဘဲ မျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်ပြီး ပြောပြန်တယ်…
ဘယ်မှ မသွားဘဲ ကုတင်ဘေးမှာ ပေပြီးစောင့်နေတယ်။
မကြာပါဘူး လူမမာ သတိရလာပြန်တယ်၊
ခုနလိုဘဲ မျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်ပြီး ပြောတယ်… ….
ဒီလိုလဲပြောရော တော်တော်လေးကိုမကျေမနပ်ဖြစ်သွားတဲ့ မိန်းမက မေးတော့တယ်… …
“ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ကျမရဲ့အလှက လျော့လျော့သွားရတာလဲ”
ဒီတော့ ယောက်ျားလုပ်သူက ပြန်ဖြေတယ်… …
“အော်... မိန်းမရယ်၊ မေ့ဆေးကလဲ တဖြေးဖြေး ပြယ်လာတာကိုး”….တဲ့။
Post by: နိုးတူး on December 19, 2013, 10:52:11 AM
Credit -> FB
Post by: သျှင်နှောင်းအိမ် (Nite.Gal) on December 20, 2013, 07:48:19 AM
Quote from: နိုးတူး on December 19, 2013, 10:52:11 AM
You can also show it to your daughter when she asks :)
Post by: နိုးတူး on December 25, 2013, 02:40:05 PM
Credit -> ဂျွမ်းပြန်ဖင်တောင်သေအောင်ရယ်ရတယ် (https://www.facebook.com/pages/%E1%80%82%E1%80%BC%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%81%BF%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%96%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%B9/623983550960158?ref=stream)
Post by: minchitko on December 27, 2013, 01:17:45 AM
ဖေ့စ်ဘွတ် " လိုက် " အလန်းစား
(ကွန်မန့် သွားပေးမိ၍ အရိုက်ခံရလျင်တာဝန်မယူ .... ခွိခွိ :P )
Post by: minchitko on December 27, 2013, 03:02:52 AM
ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကား တံဆိပ်များ " Mercedes & BMW " :-*
Post by: hackerz on January 08, 2014, 08:40:04 PM
စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ သူငယ်ချင်းလေးယောက်အတူတူ အစားစားနေကြတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ သူတို့ထဲက တစ်ယောက်က သန့်စင်ခန်းကို သွားလိုက်တယ်တဲ့။ သူသွားနေတုန်း ကျန်တဲ့ သူငယ်ချင်းသုံးယောက်က ကိုယ့်သားအကြောင်းကိုယ် ကြွားကြတယ်။ ပထမဆုံးတစ်ယောက်က ပြောတယ်
"ကျွန်တော့်သားက အခုကားကုမ္ပဏီမှာ ရာထူးအကြီးဆုံးဗျ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ခရစ်စမတ်တုန်းကတောင် သူ့ချစ်သူကို နောက်ဆုံးပေါ်ကားတစ်စီး လက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်တဲ့ဗျာ။"
" ကျွန်တော့်သားလည်း ခြံတွေမြေတွေကို ၀ယ်ရောင်းလုပ်နေတာ အရမ်းချမ်းသာနေပြီဗျ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ခရစ်စမတ်တုန်းက သူ့ချစ်သူကို ခြံအကြီးကြီး တစ်ခြံလက်ဆောင်ပေးလိုက်သေးတယ်ဗျ။ "
တတိယ တစ်ယောက်ကလည်း အားကျမခံ ပြန်ပြောတယ်
" ကျွန်တော့်သားကတော့ လေယဉ်ကုမ္ပဏီမှာ လုပ်နေတယ်လေဗျာ။ လစာကတော့ သုံးမကုန်အောင်ရတာပေါ့ဗျာ။ သူလည်း သူ့ချစ်သူကို လေယဉ်ပျံတစ်စီး ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်အဖြစ်ဝယ်ပေးထားတာဗျ။"
ခဏနေတော့ သန့်စဉ်ခန်းသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းပြန်လာတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျန်တဲ့သုံးယောက်က သူ့ကိုဝိုင်းမေးတယ်။
"ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်သားတွေအကြောင်းပြောနေကြတာဗျ။ ခင်ဗျားသားအကြောင်းလည်းပြောပါဦး"
"အေးဗျာ ကျွန်တော့်သားကတော့ ကျွန်တော့်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝန်ခံထားတယ်ဗျ။ သူဟာ မိန်းကလေးတွေကို သဘောမကျဘဲ ယောကျာ်းလေးတွေကိုမှ သဘောကျတယ်တဲ့ဗျာ။"
သူ့ရဲ့သားအကြောင်းကိုကြားတော့ ကျန်တဲ့ သူငယ်ချင်းသုံးယောက်က ၀ိုင်းပြီးလှောင်ကြတာပေါ့
"ခင်ဗျားသားရဲ့ အဖြစ်ကလည်းဗျာ။ဒါဆိုခင်ဗျားသားက အခြောက်ပေါ့။"
"အေးဗျာ ခင်ဗျားတို့ပြောလည်းခံရတော့မှာပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်သားကို အခြောက်တွေက ၀ိုင်းကြိုက်ကြတယ်ဗျ။ ပြီးသွားတဲ့ ခရစ်စမတ်ကတောင် ကျွန်တော့်သားကို အရမ်းကြိုက်နေတဲ့ အခြောက်သုံးယောက်က နောက်ဆုံးပေါ်ကားတစ်စီးရယ် ခြံအကျယ်ကြီးတစ်ကွက်ရယ် လေယဉ်ပျံတစ်စီးရယ် လက်ဆောင်ပေးထားတယ်ဗျ။"
Post by: ကြောင်ပါး on January 25, 2014, 10:35:35 AM
အိမ်က ငါ့ယောက်ကျားလေ.. ဒုတ်ကြီးရှည်ပြီး အလကားပါဟယ်.. တစ်ညနေလုံး တစ်ချက်မှကို မဝင်ဘူး... အဲ့ဒီမဝင်တဲ့ဒုတ်ကျတော့ အပြစ်မပြောဘူး..ငါ့ဘက်လှည့်မဲတယ်.. ငါအငြိမ်မနေလို့တဲ့... ငါလဲ တတ်နိုင်သလောက်တော့ ငြိမ်နေပေးပါတယ်ဟယ်.... ကြာတော့လဲ ညောင်းတယ်ဟ. မခံနိုင်လွန်းလို့ ဟိုလှုပ်ဒီလှုပ်လုပ်တော့လဲ လှုပ်ပြန်ပြီ... စကားလေးပြောမိတော့လဲ.. မင်းစကားပြောရင်ကို အာရုံပျောက်ပျောက်သွားတယ်တဲ့.. သူ့အဖြစ်မရှိတာကျမပြောဘူး.. တကယ် စိတ်တိုတယ်... တော်ပြီ .. ငါဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ.. နောက်ကို သူဂေါက်ကွင်းသွားရင် ဘယ်တော့မှ မလိုက်တော့ဘူး........"ကောင်မ..... ဂေါက်ကွင်းကို အရင်ပြောပါလား"(အေးလေ.. ငါလဲ ခေါင်းစဉ်ကို နောက်မှာထားမိသကိုး..)
credit : ရယ်စရာ Photo Comment လေးများ ( Facebook )
Post by: နိုးတူး on January 26, 2014, 12:09:06 AM
လူတစ်ယောက် ဟမ်ဘာဂါဆိုင်ထဲကို ဝင်လာပြီး၊ ဟမ်ဘာဂါတစ်ခု မှာတယ်။
ခဏနေတော့ စာပွဲထိုးက သူ့ရဲ့ဟမ်ဘာဂါကို ယူလာပေးတယ်။
အဲဒါကို သူ တစ်ကိုက် ကိုက်လိုက်တယ်၊ အဲဒီမှာ အမွေးလေးတစ်မျှင်ကို ဟမ်ဘာဂါထဲမှာ တွေ့လိုက်ရတယ်။
သူ အလန့်တကြားနဲ့ စာပွဲထိုးကို အော်တယ်... ...
"စာပွဲထိုး... ငါ့ ဟမ်ဘာဂါထဲမှာ အမွေးတစ်မျှင် တွေ့တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာ ငါကြည့်ချင်တယ်"
ဆိုတော့... စာပွဲထိုးက သူ့ကို စာဖိုမှူးအလုပ်လုပ်နေတဲ့ နောက်ဖေးဘက်ကို ခေါ်သွားတယ်။
စာဖိုမှူးက အသားစင်းကောကို ယူလိုက်ပြီး၊ သူ့ဂျိုင်းကြားမှာ ပြားအောင်လုပ်လိုက်တာကို သူမြင်လိုက်ရတယ်။
"ဒါ တော်တော်ရွံစရာ ကောင်းပါလား" ... လို့ သူပြောတယ်။
ဒါနဲ့ စာပွဲထိုးက ပြောတယ်... ...
"အဲဒါကို ရွံစရာကောင်းတယ်လို့ ခင်ဗျားကထင်နေတာ၊ သူ ဒိုးနတ် လုပ်တာကို ခင်ဗျား မြင်စေချင်တယ်"
Credit - https://www.facebook.com/thanlayko
Post by: ကြောင်ပါး on February 07, 2014, 10:46:55 PM
အချိန်ပိုဆင်းရတဲ့အတွက်..ညဖက်အိမ်ပြန်နောက်ကျသွားတဲ့...ဇနီးဖြစ်သူဟာ အိပ်ခန်းတံခါးကို ညင်သာစွာတွန်းဖွင့်ပြီးဝင်လိုက်ပါတယ် ။
၆လ ၊ ၆ပတ်၊ ၆နှစ်တဲ့
credit : http://bluenavyblog.blogspot.com/
Post by: ကြောင်ပါး on February 10, 2014, 10:08:49 AM
ခရီးသည် တစ်ယောက်....... taxi ကားငှားစီးလာ၏။
ရုတ်တရက် တစုံတခု မေးချင်လာသဖြင့် taxi ဒရိုင်ဘာ ပုခုံး ကိုလှမ်း ပုတ်လိုက်သည်။
" အောင်မလေးဗျ " ဟု ဒရိုင်ဘာကြောက်လန့်တကြားအော်ကာ ကားလက်ကိုင် မထိမ်းနိုင်ပဲ ဖြစ်သွား၏။
ကားသည်ရှေ့တွင်ရပ်ထားသော bus ကား ကို ၀င်တိုက်မလိုဖြစ်သွား၏။
လူသွားလမ်းမှ ကွမ်းယာဆိုင်တွင် ကွမ်းဝယ်နေသည့်လူများအားတိုက်မလိုဖြစ်ပီး...ဆက်သွား၏။
နောက်ဆုံး...ကွမ်းယာဆိုင်နောက် ရှိ စတိုးဆိုင်ကြီးတဆိုင်၏ မှန် တံခါးရှေ့တည့်တည့် ၆ လက်မ အလိုခန့်တွင် ရပ်တန့်သွား၏။
မိနစ်အနဲငယ်မျှ taxi ကားပေါ်တွင် တိတ်ဆိတ်သွား၏။
ခဏ အကြာတွင် ခြောက်ကပ်သောအသံဖြင့် ဒရိုင်ဘာကပြောသည်။
" ဟေ့လူ။နောက်ကို ဒီလိုဘယ်တော့မှမလုပ်နဲ့သိလား။ကံကောင်းလို့ ကား တိုက်မှု မဖြစ်တယ် "
" ကျနော်တောင်းပန်ပါတယ်။ပုခုံးကိုအသာလေးပုတ်တာနဲ့ လန့်သွားမယ်လို့ဘယ်လိုမှမထင်မိလို့ပါဗျာ "
ခရီးသည်ကအထက်ပါအတိုင်း တောင်းပန်စကားဆိုသဖြင့် ဒရိုင်ဘာပြန်ပြောလိုက်ပုံက....
" တကယ်တော့ ခင်ဗျား အပြစ်မဟုတ်ပါဖူး။ ကျနော်က ဒီနေ့မှ taxi တက်မောင်းသူလေ....၂၅ နှစ်လုံးလုံး အသုဘယာဉ် ကိုပဲ မောင်းခဲ့တာမို့ပါ "
credit --> original writer
ကုမ္မဏီပိုင်ရှင် သူဌေးတစ်ဦးက သူ့စက်ရုံကို ဝင်ရောက်လေ့လာပါတယ်။ လူတစ်ဦးဟာ အလုပ်မလုပ်ပဲ နံရံမှီနေတာတွေ့တော့ သူဌေးဟာ အင်မတန် စိတ်ဆိုးပြီး သူ့ကို ယခုလို စကားအေးအေးဆေးဆေးပဲ ပြောပါတယ်။
သူဌေး - ဒီမယ် မောင်ရင်၊ မင်းရဲ့  တစ်လ ဝင်ငွေ ဘယ်လောက်ရှိလဲ.
လူငယ် - ဒေါ်လာ ၂ထောင်ပါ ခမျာ.
သူဌေး - ရော့ဒီမှာ မင်းအတွက် ဒေါ်လာ ၆ ထောင်၊ သုံးလ အတွက် လောက် တယ်မလား၊ နောက်ခါ ဒီစက်ရုံနဲ့ ငါ့မျက်စိရှေ့ မှာ ဘယ်တော့မှ မမြင်ရစေနဲ့၊ သွားတော့
လူငယ် - ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာ .
ဒီလိုနဲ သူဌေးက အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အခြားအလုပ်သမား တစ်ဦးကို ထွက်သွားတဲ့ လူငယ်အကြောင်းကို မေးတော့ ဒီလိုဖြေပါတယ်။
" သူက ပီဇာပို့သမားပါစရာ။ ဒီစက်ရုံက မဟုတ်ပါဘူး "
သူဌေး - ဟေ............
Post by: နိုးတူး on February 24, 2014, 09:36:43 PM
ဆိုဒ်ထဲ ဗုံးခွဲတဲ့ မြန်မာ
ကျနော်တို့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ၊ Safety Officer ဖြစ်တဲ့ မလေးလူမျိုးတစ်ယောက်က မီးသတ်ဘူးအသုံးပြုပုံကို သင်တန်းပေးနေတယ်... ...
ကွက်လပ်အလယ်မှာ မီးပုံကြီးလည်း ဖိုထားတယ်။
တရုတ်၊ ကုလား၊ ထိုင်း၊ မြန်မာ လူမျိုးပေါင်းစုံ သင်တန်းသား လုပ်သားတွေက မီးဖိုကြီး ပတ်ပတ်လည်မှာ ထိုင်နေကြတယ်။
မီးပုံဘေးမှာတင် လက်တွေ့ သင်တန်းပေးနေတာလေ... ...
Safety officer က ပြောတယ်... ...
"မီးငြိမ်းဖို့ မီးသတ်ဘူးကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အဆင့်လေးဆင့်ရှိတယ်၊ အင်္ဂလိပ်လို P-A-S-S လို့မှတ်
P = pull the safety pin
A = Aim target
S = Sweep nozzle.... ဒါပဲ"
အဲဒီအချိန်မှာ ဗမာကောင်လေးတစ်ယောက်က ငုတ်တုတ်ကြီးနဲ့ ငိုက်နေတယ်
ရှေ့က ဆရာ ဘာသင်နေမှန်း မသိဘူး။
Safety officer က သူပြောစရာရှိတာ၊ သင်စရာရှိတာ သင်ပြီးတဲ့အခါ ခုနက ငိုက်နေတဲ့ ကောင်လေးကို ရှေ့ထွက်ခိုင်းပြီး လက်တွေ့ သရုပ်ပြခိုင်းတယ်... ...
"တန့်ဇင်၊ ရှေ့ထွက် သရုပ်ပြပါ"
ရှေ့ထွက်ဆိုလို့သာ ထွက်လာရ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်း မသိ
မီးသတ်ဘူးကြီးကိုင်လို့ လူရှေ့ထွက်ပြီး ငေါင်တောင်တောင်နဲ့ ရပ်နေတယ်...
သူအကျပ်ရိုက်နေတာကို သိတဲ့ တခြားဗမာလေးတစ်ယောက်က မြန်မာလို မကြားတကြားလှမ်းပြောတယ်... ...
"ဟကောင်၊ အဆင့်တစ်က ပင်ကိုဆွဲဖြုတ်တာကွ၊ လက်ပစ်ဗုံးလိုကွာ လက်ပစ်ဗုံးလိုလုပ်ရတာ၊ လက်ပစ်ဗုံးလိုလုပ်..."
ဒီတော့မှ ကိုယ့်ဆရာသန့်ဇင်လည်း မျက်နှာကြီး ပြုံးသွားတယ်...
ဒို့နိုင်ငံက ရုပ်ရှင်တွေထဲ အမြဲမြင်နေတာ
-ပြီးတာနဲ့ မီးသတ်ဘူးကို မီးပုံထဲ လှမ်းပစ်ထည့်လိုက်တယ် 'အင့် ဟာ'
လက်ပစ်ဗုံးလိုလုပ်လို့ ပြောတာကိုး... ...
ရှိသမျှ သင်တန်းသားတွေရော၊ ဆရာတွေရော နီးစပ်ရာ အုတ်နံရံဘေးကို ဝရုန်းသုန်းကား ပြေးဝပ်ကြတာမှ ပြားပြားကို ကပ်လို့ဗျာ...
ပါးစပ်တွေကလည်း အသံမျိုးစုံထွက်လို့... ... ...
Credit -> သန်၎ကို - https://www.facebook.com/thanlayko
Post by: နိုးတူး on February 24, 2014, 09:44:20 PM
စင်္ကာပူနိုင်ငံက ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မြန်မာအများစုတော့ သိကြမယ်။
-လူမျိုးပေါင်းစုံတာ ရှိမယ် မထင်ဘူး။
-ဘာသာစကားပေါင်းစုံတာ ရှိမယ် မထင်ဘူး။
-ဓလေ့စရိုက်၊ အကျင့်စုံတာ ရှိမယ် မထင်ဘူး။
စင်္ကာပူမှာ ပြောနေတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားက စင်္ကလစ်ခ်ျ လို့ခေါ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်ဇာတ်ပျက် စကား။
အဲလို ဇာတ်ပျက်စကားကို မဏ္ဍိုင်ထားပြီး ပြောနေတဲ့ ကျနော်တို့ Construction site တွေထဲမှာကျတော့ လူမျိုးပေါင်းစုံရဲ့ စကားတွေပါ အသုံးတွင်ပြီး နေရာယူနေကြပြီ။
မလေးစကားတွေ၊ အင်ဒီးယားစကားတွေ၊ တရုတ်စကားတွေက စင်္ကလစ်ခ်ျနဲ့ ရောနှောလို့ ... ဖြစ်ချင်တိုင်းကို ဖြစ်နေတာ
နဂိုက ကိုယ်နည်းနည်းသိခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါတွ၊ အသုံးတွေ၊ ဒီရောက်ပြီး တစ်နှစ်လောက်အကြာမှာ ဘဝပျက်ကုန်ရော....
ခုတော့လည်း လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ အလုပ်ဖြစ်အောင် ပြောဆို ဆက်ဆံရင်းနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်နေပါပြီလေ
ကိုနှင်းမောင်လို သဒ္ဒါနည်းကျ အလွန်အဆင်မြင့်တဲ့ လေယူလေသိမ်းတွေ လာမလုပ်နဲ့ ရိုက်မလွတ်ရင် ကံကောင်းတယ်လို့မှတ်... ...
Word form တွေ၊ verb form တွေ၊ tense တွေ ဘာတွေ လာမပြောနဲ့ ဘုကြည့်ကြည့်ခံရမယ်။
တကယ်တန်းကျတော့ ကျနော်တို့လို အင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ အောက်ခြေမှာ အကြိတ်အနယ် တွယ်ရတာက အင်ဒီယား အလုပ်သမား၊ ဘင်္ဂလား အလုပ်သမား၊ တရုတ်အလုပ်သမားတွေများတယ်...
ကိုယ်ပြောချင်တာကို သူတို့နားလည်အောင် အတိုဆုံး၊ အရှင်းဆုံး အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ ပြောရတယ်။
ပြောပြီးလို့ "နားလည်သလား you understand?" လို့ မေးကြည့်လိုက်... ...
"I many many understand"... လို့ ပြန်ဖြေလိမ့်မယ်။
"နားလည်တာမှ နည်းနည်းမဟုတ်ဘူး အများကြီး အများကြီး နားလည်တယ်"... လို့ပြောတာ
Write တွေ၊ wrote တွေ၊ written တွေ နားမလည်းဘူး၊
"ရေးတာ" ကို ပြောချင်ရင်... writing ပဲ။
"Who writing?" (ဘယ်သူရေးတာလဲ)
"I no writing" (ကျနော် ရေးတာ မဟုတ်ဘူး)
"မင်းနာမည်ကို ဒီနေရာမှာ ရေးပါ" ဆိုရင် "you writing your name here" ပဲ။
ထားပါ... ပြောရင် ရှည်ပါတယ်၊ တကယ်ပြောချင်တာက... cutting အကြောင်း။
တခုခု ဖြတ်ရင်လည်း cutting ပဲ။
ပြတ်သွားရင်လည်း Cutting လို့ပဲ ပြောကြတယ်။
"ဒီသစ်သားချောင်းကို ဖြတ်စမ်း" ဆိုရင် "You cutting this Kayuu" တဲ့။
(အဲဒီနေရာမှာ သစ်သားကို wood တွေ၊ Timber တွေ မခေါ်ဘူး၊ ကာယူး လို့ ခေါ်တာ၊ မလေးစကားထင်ပါရဲ့)
တခါက အလုပ်သမားတစ်ယောက် Site ထဲမှာ အက်စီးဒင့် ဖြစ်တယ်။
သူ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ ဘင်္ဂလားအလုပ်သမားက အက်စီးဒင့်ဖြစ်တော့ သက်ဆိုင်ရာ Safety supervisor ဆီ Grid ဝေါ့ကီတော့ကီ နဲ့ လှမ်းခေါ်တယ်... ...
"Hello... Ba-yar, my friend Husein head cutting, head cutting, come come"
အိုး... မိုင်ဂေါ့... ဟူစိန်တစ်ယောက်တော့ ခေါင်းပြတ်သွားပြီ ဆိုပါလား
ဘယ်က ဘယ်လို ဖြစ်ရတာပါလိမ့်
အင်း... ပြသနာကတော့ မိုးမီးလောင်တာကမှ သက်သာအုံးမယ်... ဆိုပြီး
....အဲဒီ Safety supervisor က သူ့အထက်က safety officer ဆီ သတင်းပို့၊ Safety officer ကလည်း ကမန်းကတန်း site ထဲက Ambulance ကို ခေါ်...
Project manager တွေရော၊ Project Director တွေရော.. ရှိသမျှ လူကြီးတွေလည်း အဲဒီအခင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ နေရာကို ကသောကမြော ပြေးကြရတာပေ့ါ
စင်္ကာပူမှာက လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အလုပ်သမားသေရင် ပြသနာက အကြီးကြီး။
ပြစ်မှုထင်ရှားရင် တာဝန်ရှိသူတွေကို ၂နှစ်ထိ ထောင်ချတယ်၊ ဒဏ်ငွေ ၂သိန်းထိ တပ်တယ်။
...ဆိုတော့... လူကြီးတွေလည်း စိုးရိမ်တကြီးနဲ့ ပြေးကြတာပေ့ါ
အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကို ရောက်တော့ Safety officer က အရင်ပြေးသွားပြီး ဝိုင်းအုံကြည့်နေတဲ့ အလုပ်သမားတွေကို အော်တယ်... ..
"သွေးသံရဲရဲ မကြည့်ရဲတဲ့သူတွေ ဘေးဖယ်၊ မဆိုင်တဲ့သူတွေ ဘေးဖယ်"
ခုနက ဝေါ့ကီတော့ကီနဲ့ အကြောင်းကြားတဲ့ ဘကုန်းရယ်
သူ့ဘေးမှာ နဖူးလေးကို လက်နဲ့ဖိထားပြီး မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ထိုင်နေတဲ့ နောက်ဘကုန်းတစ်ယောက်ရယ်ကို တွေ့ရတယ်
ခေါင်းပြတ်ကြီးရယ်၊ ကိုယ်လုံးရယ်က မတွေ့ရဘူး၊ တာလပတ်နဲ့များ အုပ်ထားလားလို့ ဘေးဘီဝဲယာ ကြည့်တော့လည်း မတွေ့ရ...
ဒါနဲ့ မေးတာပေ့ါ... ...
"ဒီမှာ..." ... ဆိုပြီး နဖူးဖိထားပြီး ထိုင်နေတဲ့ ကောင်ကို လက်ညိုးထိုးပြတယ်။
"ငင်... နင်ပြောတော့ ဟူစိန် ခေါင်းပြတ်သွားပြီ Head cutting ဆို"
"ဂျာ... အနော်ပြောတာက သူ့ခေါင်းကို သစ်သားစထိပြီး ပြတ်(ရှ) သွားလို့ cutting လို့ ပြောတာ"
"ဟင်... မအေ @%$^&n %^$#@!"
နေ့လည်က ကျနော်တက်ခဲ့ရတဲ့ SIC သင်းတန်းမှာ သင်တန်းဆရာက မတူညီတဲ့ စက်တွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်တဲ့ ဒဏ်ရာတွေကို ဘာဒဏ်ရာဖြစ်မလဲလို့ သင်တန်းသားတွေကို မေးတယ်... ..
ဘာမေးမေး Cutting ချည့်ပဲ ဖြေနေကြတော့ အဲဒီ ဟူစိန်ခေါင်းပြတ်ကြီးကို သွားပြီး သတိရမိလို့ပါ...
Credit => https://www.facebook.com/thanlayko
Post by: နိုးတူး on March 05, 2014, 12:22:01 AM
Mr.Bean က ပို့ဆောင်ေ၇းလုပ်ငန်းတခုမှာ မီး၇ထားမောင်းတယ်။
တနေ့မှာ သူမောင်းလာတဲ့ ၇ထားဟာ လမ်းချော်ပြီး လယ်ကွင်းထဲထိုးကျသွားတယ်.။
လူတွေ တော်တော်များများ ဒဏ်၇ာ၇ ကုန်တယ်။ဒီအခါ ၇ဲက Bean ကိုခေါ်မေးတယ်။
၇ဲ။……..။“မင်း ဘာလို့ ဒီလိုနမော်နမဲ့ နိုင်၇တာလဲ။မီး၇ထားမောင်းတယ်ဆိုတာ လူ့အသက်တွေ အ များကြီးကို မင်းလက်ထဲထည့်ပြီး မောင်း၇တာကွ.။မင်းဘာလို့ ခုလိုလုပ်၇တာလဲ။”
Credit ->> https://www.facebook.com/myanmaronlinemedianews
Post by: နိုးတူး on March 13, 2014, 09:58:19 PM
ဆရာဝန်နဲ့ အင်ဂျင်နီယာ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် စတိုးဆိုင်ထဲကို ဝင်သွားပါတယ်။
ဆိုင်ကထွက်လာတော့ ဆရာဝန်က အင်ဂျင်နီယာကို ယခုလိုပြောပါတယ်။
"ဟေ့ကောင် ဒီမှာ ငါ့အိတ်ကပ်ထဲက ချောကလက် ၃ ချောင်း။ မင်းငါ့လို ခိုးနိုင်လား၊ ငဲငဲ"
ဒီတော့ အင်ဂျင်နီယာက -
"အဲ့ထက် ကောင်းတဲ့ ခိုးနည်းတွေရှိပါတယ်ကွာ။ မင်းမြင်ချင်လား။ စတိုးဆိုင် ပြန်လိုက်ခဲ့"
ဒီတော့ နှစ်ယောက်သား စတိုးဆိုင်ထဲရောက်သွားပြီး ကောင်တာက လူငယ်လေးကို အင်ဂျင်နီယာက ယခုလို ပြောပါတယ်။
"ညီလေး။ အကိုမင်းကို မျက်လှည့်ပြရင် ကြည့်မလား"
ဒီတော့ ကောင်တာမှ လူငယ်ကလည်း "အင်း. ကြည့်မယ်လေ"
အင်ဂျင်နီယာက ချောကလက်တစ်ချောင်း တောင်းပါတယ်။ လူငယ်က လည်း ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူ့ရှေ့ မှာပဲ အခွံခွာ ထုတ်စားပြီး နောက် တစ်ချောင်း ထပ်တောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ နောက် တစ်ချောင်းတောင်းပြီး လူငယ်ရှေ့ မှာပဲ ကုန်အောင် စားပစ် ပါတယ်။
ပြီးတော့ မင်သက်စွာ ကြည့်နေတဲ့ လူငယ်လေးကို အင်ဂျင်နီယာက ယခုလို မေးပါတယ်။
"အကို စားခဲ့တဲ့ ချောကလပ်သုံး ချောင်း ဘယ်ရောက်သွားလဲသိချင်လား"
လူငယ်က ဟုတ်ကဲ့လို့ ဖြေတော့ အင်ဂျင်နီယာက အောက်ပါအတိုင်း ဖြေပါတယ်။
"အင်း ဘေးက အကို့သူငယ်ချင်း အိတ်ကပ်ထဲမှာ ရှိတယ်"
Post by: thuraphe on April 01, 2014, 10:28:03 PM
ညားကာစ စုံတွဲတစ်တွဲ ဝတ်လစ်စလစ်ကမ်းခြေတစ်ခုကို အလည်ရောက်လာတယ်။
ကမ်းခြေမှာ လျှောက်ကြည့်ကြရင်း Tattoo ထိုးတဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှေ့ ရောက်လာကြတယ်။
ကောင်မလေးက သူ့ကောင်လေးကို အချစ်စမ်းသတဲ့… …
“မောင်…ကျမကို တကယ်ချစ်ရင် မောင်လိင်တံမှာ ကျမနာမည် Tattoo ထိုးပါလားဟင်”
ကောင်လေးကလည်း သဘောတူလိုက်တယ်။ Tattoo ထိုးမယ်လုပ်တော့ ဆိုင်ရှင်ကပြောတယ်… …
“ခင်ဗျား လိင်တံကို မာတောင့်လာအောင် အရင်လုပ်၊ ပျော့နေရင် Tattoo ထိုးလို့ အဆင် မပြေဘူး”
ပြောတဲ့ အတိုင်း မာတောင်လာအောင် လုပ်လိုက်ပြီး ကောင်မလေးရဲ့နာမည် Wendy ကို လိင်တံပေါ်မှာ အောင်မြင်စွာ ရေးထိုးပြီးသွားသတဲ့။
လိင်တံပြန်ပျော့သွားတဲ့အခါမှာတော့ Wendy စာလုံးက အပြည့်မပေါ်ဘဲ Wy လို့သာ ပေါ်တယ်။ အရေပြားက ရှုံ့သွားတာကိုး။
ဒါနဲ့ ပြီးသွားတော့ ကမ်းခြေမှာ နေစာလှုံကြတယ်။ အဲလိုနေစာလှုံနေတုံး သူတို့ဘေးမှာ နေစာလှုံနေတဲ့ လူမဲတစ်ကောင်ရဲ့ လိင်တံကို ကောင်လေးက အမှတ်မထင် ကြည့်မိလိုက်တယ်။
လူမဲရဲ့လိင်တံမှာလဲ Wy လို့ Tattoo ထိုးထားတာကို တွေ့လိုက်ရတော့ အံ့သြသွားပြီး သွားစပ်စုသတဲ့… …
“အကိုကြီးမှာ ချစ်သူ ရှိတယ်ထင်တယ်”
“အကိုကြီးချစ်သူနာမည်ကလည်း Wendy မဟုတ်လား”
“ဟုတ်ပါဘူး၊ မေရီပါကွ၊ ဘာလို့ မင်းက အဲလို ထင်တာလဲ”
…ဆိုတော့ ကောင်လေးက သူ့အဖြစ်နဲ့ ယှဉ်ပြီးစဉ်းစားတာကိုပြောပြတယ်... …
“ကျနော့်မှာလဲ Wy လို့ပေါ်တယ်လေ၊ အကိုကြီးမှာလဲ Wy ဆိုတော့ ဆင်တူဖြစ်နေလားလို့ပါ”
ဒီတော့ လူမဲကြီးကပြန်ပြောတယ်… …
“င့ါမှာရေးထားတာက Welcome to Jamaca, haveanice day ကွ”…တဲ့။
Post by: thuraphe on April 01, 2014, 10:31:29 PM
တခါကသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ကာစီနိုဝိုင်းမှာဆုံကြပါတယ် ။
"ဟာ သူငယ်ချင်းငါတို.မတွေ.တာလည်းကြာပြီ ၊
ဖဲရိုက်ရင် ၀ိုင်းလုံးကျွတ်တောင်နိုင်ခဲ့သေးတာ "
ကဲဒီမှာလည်းငါတို.နှစ်ဟောက်ပေါင်းပြီး ကံစမ်းလိုက်ကြရအောင် "
ငါတော့ ၅နှစ်ရှိပြီ "
"ငါက ၄နှစ်ကွ " "'ဒါဆို ၅+၄ =၉ ကိုထိုးကြမယ်ဟေ."
တကယ်ပဲ ၉ကျပြီးနိုင်သွားပါလေရော ။
ဒါနဲ့ နှစ်ယောက်သားက "နိုင်သမျှအကုန်ထိုးရအောင်ကွာ "
"ငါလည်းနှစ်ယောက်ပဲ ၊ဒီတော့ ၄ကိုအောရအောင် "
ဆိုပြီး ၄ ထိုးလိုက်တာ နိုင်သွားပြန်ပါရော ။
"ဟာသူငယ်ချင်းရေမင်းနဲ့ငါနဲ့ကတော့ တစ်ကယ်ကံစပ်တယ်ဟေ့ "
"ကဲနိုင်သမျှထိုးမယ်ကွာ မင်းမှာ မယားငယ် ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလည်း
ငါကတော့ ၃ယောက် "
"ဟီးကျွန်တော်က ၂ယောက် "
"'ဒါဆို ၅ကိုထိုးကြတာပေါ့ "ဆိုပြီး ၅ ကိုထိုးလိုက်တာနိုင်သွားပြန်ပါတယ် ။
"ကဲဒီတစ်ခါတော့ နောက်ဆုံးနဲ. သူဌေးဖြစ် ခွေးဖြစ်ပဲဟေ့"
" မင်းရဲ့အချောဆုံးကီပင်လေးကို တည ဘယ်နှစ်ခါလောက် ဆားဗစ်ပေးနိုင်သလဲ
ငါကတော့ အင်း ........(နည်းနည်းစဉ်းစားလိုက်ပြီး ) တည အများဆုံး ၁၀ချီပဲ "
ကျွန်တော်ကတော့ ၁၅ချီ ဗျာ ဒါတောင်ဆေးဝါးမကူသေးဘူး "
"ကဲဒါဆို ၂၅ ကိုအောရအောင်ဟေ့ ရသမျှအကုန်ပဲ "ဆိုပြီး ထိုးထည့်လိုက်တာ
ကျတဲ့နံပါတ်က (၄) ဖြစ်သွားပါတယ် ။
" အင်းငါတို.နှစ်ယောက် မလိမ်ဘဲအမှန်အတိုင်းပြောခဲ့ရင် ဒီအချိန်မှာ သူဌေးဖြစ်နေပြီနော် "
Post by: thuraphe on April 01, 2014, 10:45:54 PM
အခုရေးသော စာအား ဟာသရှု.ထောင်.မှသာ ခံစားရန် လေးစားစွာအသိပေးပါတယ်ခင်ဗျား...............
တစ်ခါက အထူးကုဆေးခန်း တစ်ခုတွင် မယ်သီလရှင်တစ်ပါး နေမကောင်းသဖြင်. ဆေးခန်းလာပြရာ
တာဝန်ကျဆရာဝန်မှ ဆီးစစ်ပြီးမှလာခဲ.ရန်ပြောပြီး ဆီးစစ်ရန်လွှတ်လိုက်ရာ မယ်သီလရှင်လဲဆီးစစ်ပြီး ဆရာဝန်ထံပြန်လာပြလေသည်။ဆရာဝန်မှ ဆေးစစ်ချက်အဖြေအားကြည်.ရာ အရမ်းအံ.သြသွားပြီး ဆရာလေးနှင်.နှစ်ယောက်ထဲဆွေးနွေးရန်လိုကြောင်း ပြောလေသည်။ထို.နောက် ဆရာလေးအား ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲ ဆရာလေးရာ ဆရာလေးမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဟုဆိုလေသည် ဆရာလေးမှလည်းမဖြစ်နိုင်ကြောင်း မိမိမှာ မည်သူနှင်.မျှ ဘာဆိုမဘာဘူးကြောင်းပြောလေသည်။ဆရာဝန်မှလည်း အမျိုးမျိုးဖြောင်းဖျမေးလေသည်။ဆရာလေးမှလည်းငိုယိုပြီး မဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောလေသည်။သို.နှင်.ဆရာဝန်မှ ဓာတ်ခွဲခန်းအားသေချာစစ်ပေးရန်ထပ်ပြောလေရာ ဓာတ်ခွဲခန်းမှ ဆီးပုလင်းမှားသွားကြောင်း အကြောင်းပြန်လေသည်။ဆရာဝန်လဲ ဆရာလေးအားဘာပြောရမှန်းမသိအောင် အားနာသွားပြီး ကဲကဲ မငိုပါနဲ.တော.ဆရာလေးရယ် ကျနော်ယုံပါတယ် သွားလို.ရပါပြီ ဘာမှမပူပါနဲ.အဆင်ပြေအောင်ကျနော် လုပ်ပေးပါမယ်ဟုပြောလိုက်လေသည်။
ထိုအခါဆရာလေးလဲ ထသွားပြီး တံခါးဝရောက်မှ ဆရာရယ် မသိလို.မေးပါရစေ ဆိုတော. ဆရာဝန်က....... မေးပါမေးပါ
ဆရာလေးမေးလိုက်ပုံက.....................ဒါဆို....ဒါဆို ဆရာရယ် ဖယောင်းတိုင်နဲ.ကော ဗိုက်ကြီးတတ်သလားဟင် တဲ.ဗျာ............:lol::lol::lol::lol:
Post by: thuraphe on April 01, 2014, 10:56:23 PM
တညမှာတော့ သားမက်ဖြစ်သူက အရက်မူးပြီးအိမ်ပြန်လာပါတယ် ။
မူးမူးနဲ့ ယောက္ခမ ဖြစ်တဲ့သူရဲ့အခန်းထဲမှားဝင်ပြီး ယောက္ခမကြီးကို
ယောက္ခမဖြစ်တဲ့သူကလည်း အစပိုင်းကတော့ ငြင်းမလို.လုပ်ပြီးခါမှ
သားမက်ဖြစ်တဲ့သူက မူးမူးနဲ.ကျုံးနေရင်း တဖြေးဖြေးနဲ့အမူးလည်းပြေလာရော
ဟာ ငါ့မိန်းမပစ္စည်းကဒီတခါ ချောင်လှချည်လား ဆိုပြီး မျက်နှာကိုအသာငုံကြည့်မှ
ကိုယ့်မိန်းမရဲ့အမေ ဖြစ်နေမှန်းသိတော့ ကြောက်ကြောက်နဲ့အတင်း ကုတင်ပေါ်ကဆင်းပြေးမယ်လုပ်တော့
ဒီဂရီတက်နေပြီဖြစ်တဲ့ ယောက္ခမက အတင်းလည်ပင်းကို ဖမ်းဆွဲပြီး ပြောလိုက်ပုံက
"ဟဲ့သေနာကောင်လေး အခုမှဆင်းပြေးမနေနဲ့ ၊
နောက်လည်းမဆုတ်နဲ့၊နောက်လည်းမလုပ်နဲ့ ၊အခုပြီးအောင်လုပ်သွား "ဟူသတည်း။
Post by: thuraphe on April 01, 2014, 11:04:29 PM
စောစောကပြောရောပေါ့ ဒါမျိုးဆို ကြိုက်ပြီးသား
Gay နှစ်ယောက်တို့သည် နောက်ဖေးလမ်းကြားတခုအတွင်း၌ Sex ကိစ္စပြုလုပ်နေကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် သူတို့ထံသို့ ရဲသားတယောက် လာနေသည်ကို လှမ်းတွေ့လိုက်၏။ ၄င်းတို့ နှစ်ယောက်စလုံး အထိတ်တလန့်ဖြင့် ခြေဦးတည့်ရာ ထွက်ပြေးကြပြီး ပုန်းဖို့နေရာရှာပြီး ကမန်းကတန်း ပုန်းနေကြလေသည်။
နောက်မှလိုက်လာသောရဲက တဟုန်ထိုး အပြေးလိုက်သဖြင့် Gay တစ်ယောက်ကို မိသွားပြီး မှတ်လောက်သားလောက်အောင် ရိုက်နှက်လေတော့သည်။ စိတ်ကြေနပ်လောက်အောင် ထုထောင်းရိုက်နှက်ပြီးသွားသောအခါတွင် ၄င်း လိင်တူချင်းဆက်ဆံသော Gay အား မလှုပ်ရှားနိုင်အောင် နံရံဘက်ကို မျက်နှာမူစေ၍ ချုပ်ထားပြီး အခုလို အော်ပြောလိုက်သည်။
......ဘယ်မှာလဲ မင်းရဲ့ F K Boyfriend။ အဲဒီကောင်ကို ငါရှာလို့တွေ့လို့ကတော့ အဲဒီကောင်ဖင်ထဲကို ဒီဓါတ်မီးကြီး အဆုံးထိ ထိုးထည့်ပစ်လိုက်မယ်။ဘာမှတ်လဲ........
တဖက်ခြမ်းအမှောင်ထဲမှ တီးတိုးအသံလေးတသံ ထွက်ပေါ်လို့လာသည်။
ဟင့်.... အမှိုက်ပုံးထဲမှာ ပုန်းနေတာ....
Post by: နိုးတူး on April 03, 2014, 06:29:31 PM
ဘဝမှာ 100% အောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်... ...
-ယောက်ျာ်းတွေအတွက် အရည်အချင်းက 100% လိုပါတယ်။
-မိန်းမတွေအတွက် အရည်အချင်းက 4% ပဲ လိုပါတယ်။
(ကျန်တာက 36-24-36 )
Credit to -> https://www.facebook.com/thanlayko
Post by: kagyimg on April 05, 2014, 10:36:04 AM
အမျိုးသမီးနှစ်ယောက် လမ်းမှာတွေ့တော့ တယောက်က မေးတယ်... ...
"ညည်း... ရပ်ကွက်ထဲက ခပ်ချောချောကောင်လေးကို ဆော်ပလော်တီးလွတ်လိုက်တယ်ဆို"
"ဘာလို့လဲ .. အေ့"
"သူက င့ါကို အခန်းထဲ ဆွဲခေါ်တယ်လေ"
"ဒါလောက်က ကိစ္စမရှိပါဘူး၊ အထဲရောက်တော့ င့ါအဝတ်အစားတွေကို ဆွဲချွတ်တယ်လေ"
"ဒါလည်း ခွင့်လွတ်လို့ ရပါသေးတယ်၊ င့ါကို ကုတင်ပေါ် တွန်းလှဲတယ်လေ"
"ဒါလည်း ပြသနာမဟုတ်ပါဘူး၊ နောက်ဆုံး သူပြောတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကြောင့် တီးထည့်လိုက်တာ"
"ဟေး... April fool တဲ့"
"ဟင်...., ညည်း အဲ့ကောင်ကို အသေသတ်လိုက်ရမှာ... "
Post by: kagyimg on April 09, 2014, 07:40:18 PM
ဇနီးဖြစ်သူ နေမကောင်းသဖြင့် ဆေးရုံတင်ထားစဉ် ခင်ပွန်းလုပ်သူက လူနာခန်းတွင် ပြုစုပေးနေသည်.. ရောဂါဝေဒနာ ခံစားနေရသော ဇနီးသည်က ခင်ပွန်းဖြစ်သူအား မေးလိုက်သည်။
ခင်သာမရှိရင် နောက်မိန်းမက ခင့်ဗီရိုထဲကအ၀တ်တွေ ယူဝတ်တော့မှာဘဲ..
စိတ်မပူပါနဲ့ကွာ.. သူကမင်းနဲ့ ဖိနပ်ဆိုက်မတူပါဘူး.. အယ်...တိန်..သွားပြီ
Post by: ကြောင်ပါး on May 09, 2014, 04:43:09 PM
ဆေးရုံတစ်ခု ဟာလူနာတွေကိုလေယာဉ်နဲ့ တင်ဆောင်လာပြီးတော့
အခြားဆေးရုံတစ်ခုကို ပြောင်းပါတယ်။ ဆရာဝန်ကတော့
လေယာဉ်မှုးဘေးမှာထိုင်နေပါတယ်။ အဲဒီမှာ လေယာဉ်ထဲ ကနေ
ဆရာဝန်က အရုးခေါင်းဆောင်ကို ဘဲလ် နှိပ်ပြီးလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။
“ဘာလုပ်နေကြတာလဲ..ဆူညံနေတာပဲ” “ဘောလုံးကန်နေကြတာပါ ဆရာ”
ခဏနေ တော့ဘာသံမှ မကြားရတော့။
အဲဒါနဲ့ ကျွှန်တော်လည်း လေယာဉ် တခါးပေါက်ကိုဖွင့်ပေးလိုက်တာ အခုသူတို
Credit : facebook ပေါကြောင်ကြောင်ဟာသများ
Post by: loverlay007 on May 17, 2014, 10:08:10 PM
စာကြောင်းလေး ၂ကြောင်းပေမယ့် ပြုံးမိပါသေးတယ်ဗျာ :P :P
credit to - ဟာသဓါတ်ပုံများ
Post by: loverlay007 on May 17, 2014, 10:21:12 PM
ကား နှင့် တူသော မိန်းမများ
'အခုခေတ် ၈တန်း ၉တန်းကလေးတွေက Facebook ပေါ်မှာ သိပ်စပ်စလူး ထတာပဲနော်'
'အင်း ... သူတို့က Honda Fit လေးတွေလေ ... အကောင်သေးပီး လှစ်လှစ် လှစ်လှစ်နဲ့'
'၁၀တန်းပီးကာစ ကောင်မလေးတွေလဲ ဂေါတယ်နော်'
'အင်း သူတို့က Taxi လေ ... လူတိုင်းစီးကြတယ် ... တခါတလေ လူပိုတောင်ခေါ်တင်ကြတယ် .. နားလည်မှု လေးတွေနဲ့'
'အော်.. ဒါဆို ၁၈ ၁၉ လေးတွေကရော..?'
'သူတို့ကတော့ Lamborgini ပေါ့ကွာ.. လူတိုင်းလဲမစီးနိုင်ဘူး ဈေးလဲကြီးတယ် စီးနိုင်တဲ့ကောင်လဲ ဆီဖိုးနဲ့မွဲမှာ'
'ဒါဆို ၂၀-၂၁ ကောင်မလေးတွေရော??'
'သူတို့ကကျတော့ Luxury Car ပေါ့ကွာ ... အများကြီးစီးလို့မကောင်းဘူး ... ဇိမ်ခံဖို့အတွက်ပဲလေ' (^_^)
'အာ့ဆို ၂၂-၂၃ လေးတွေကရော??'
'အဲ ... သူတို့ကကျတော့ Used ကားတွေလိုမျိုး ... စီးမဲ့လူက သေချာစစ်ပီးဝယ်ကြတာ.. တခါတလေ အနောက်က ၀င်ကျုံးပီးသားကြီးတွေ..'
'အော်.. အနောက်ကနေ ကားတိုက်တော့ ကားအနောက်ပိုင်းကို တခြားကားနဲ့ဝင်ကျုံးပီးသားကို ပြောတာပါကွာ.. အဟီး'
ချစ်သူမျက်နှာ တဖြည်းဖြည်း ပျက်လာသည်။
'ဟွန်း ... ၂၃-၂၄ တွေကရော?'
'တဖြည်းဖြည်း နဲ့ ဘူတာနားကပ်လာသလိုပဲ ... အဟီး'
'အဟီး... သူတို့ကကျတော့ ဇုံထုတ်တွေပေါ့။ ဒီခေတ်ထဲမှာ စီးတဲ့လူ မရှိသလောက်ရှားသွားပီ ... စီးမယ်ဆို အဲ့စီးတဲ့ကောင်က ရူးနေလို့ ... အငှီး'
'ချစ်ကတော့ နိဗ္ဗာန်ယာဉ် ပေါ့'
( ဓားနဲ့လိုက်လို့ ပြေးခဲ့ရသည်။)
credit to - Kaung Htet
Post by: phonex2013 on June 08, 2014, 11:07:31 AM
အီးမေးလ်ထဲက ရတဲ့ ရီစရာလေးပါ ... နေရာမှားရင်လည်း သင့်တော်ရာရွှေ့ပေးကြပါရန် ..
ကောင်မလေးများရဲ့ ရွှင်ပြုံးချင်စရာရာကောင်းသော အလေ့အထလေးများ
၁။ ကျွန်မတို့တွေက နိုးစက်ကိုလိုတာထက် (၁၀) မိနစ်ကြိုပေးတတ်ကြတာတောင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အိပ်ပျော်သွားမြဲပါပဲ။
၃။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ကြီးမားလှတဲ့ လက်ကိုင်အိပ်ထဲကို ဖုန်းကိုပစ်ထည့်တတ်ကြပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဖုန်းမြည်လာတဲ့အခါဖုန်းကိုရှာမတွေ့လို့ ကမန်းကတန်းဖြစ်တတ်ကြတယ်။
၆။ ခေါင်းပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ မျက်မှန်ပျောက်လို့ လိုက်ရှာနေတတ်ပါတယ်။
၂၀။ ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေကို ကြည့်တဲ့အခါ အမျိုးသားတွေအနေနဲ့တော့ လက်တွေ့ဘဝကနေခဏလွတ်မြောက်မှုကိုရှာဖွေတတ်ကြပါတယ်။
ကျွန်မတို့အမျိုးသမီးတွေကတော့ လက်တွေ့ဘဝအကြောင်းနဲ့ တိုက်ဆိုင်လောက်တာတွေကို စိတ်ကူးရင်ဆန်ဆန် ရှာနေတတ်ကြပါတယ်။
၂၁။ ကျွန်မတို့အားလုံး ပိုးကောင်၊ ပင့်ကူ၊ ပိုးဟပ်နဲ့ ကြွက်တွေကိုကြောက်ကြတယ်။
၂၂။ (၃) ရက်ကြာခရီးသွားဖို့အတွက် အဝတ်အစား (၇) စုံပြင်ဆင်လေ့ရှိတယ်။ ဘာဝတ်ရမလဲဆိုတာရွေးချယ်ရအောင်လို့ပါ။
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ရယ်စရာကောင်းတဲ့ အလေ့အထလေးတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Post by: phonex2013 on June 08, 2014, 11:19:18 AM
ဒီဟာသလေးလည်း မေးလ်ထဲက ရတာပါပဲ .. သဘောကျလို့ ... ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာပါခင်ဗျာ ..
(၁) အပျိုကြီးများ မင်္ဂလာမဆောင်ဘူးကြောင်း သေချာ
(၂) တနေ့ပန်းသီး တစ်လုံးစားပါက တစ်လအကြာတွင် ပန်းသီး အလုံး ၃၀ခန့် ကုန်နိုင်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ ..
(၃) ကလေးငယ်များကို မွေးကင်းစအရွယ်မှ စတင်ပြီး မိခင်နို့တမျိူးထဲကိုသာ စွဲစွဲမြဲမြဲတိုက်ပါက နောက်ချိန်တွင် လူကြီးများဖြစ်လာကြောင်း
(၄) နေပူရှိန်မြင့်မားသော နေ့ခင်းဘက်များတွင် ထီးအုပ်ထုပ်မဆောင်းပဲ အပြင်ထွက်ပါကအသားမည်သွားကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ
(၅) အရက်ကိုအလွန်အကြွံသောက်သုံးပါက အမူလွန်ပြီး အော့အန်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိပါကြောင်းနှင့် နောက်ဆုံးယနေ့အတွက်မိုးလေ၀သအထူးသတင်းအနေနဲ့ ယနေ့ည မိုးချုပ်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း ...
Post by: နတ်ဆိုးကြီး on June 10, 2014, 12:55:18 PM
၁၈+ ဟာသ ဆန်ဆန်ပါ......ဦးဒိန်းဒေါင် နှင့် ဦးခင်လှိုင် ဟာသများကို နတ်နတ် ရေးသား ပြန်လှည်ဝေမျှပါသည်။
လူဆိုတာ အရင်ကမရှိ.....နေနတ်သား နှင့် လနတ်သမီး ကြောင့်သာပင်.... ???
တနေ့သော အခါ....နေနတ်သားနှင့် လနတ်သမီးတို့ ချစ်ခင်စုံမက်ကြလေသည်..... ;)
အချစ်နောက် အမှားတို့ ကပ်လိုက်လာသောအခါ လနတ်သမီးတွင် မပေါ့မပါးဖြစ်တော့လေသည်....တမုံ :o
ထိုအချင်းအရာ ကိ်ုသိသွားသော နေနတ်သား၏ဖခင် ကောင်းကင်နတ်မင်း(နတ်နတ်...မဟုတ် :P :P :P)သိလေသောဝ်.....
"ဟယ်..လနတ်သမီး...နင်က ငါ့သားနဲ့ တူသလားတန်သလား"...ဘာညာပေါ့
"နောက်နောင် ငါ့သားနှင့်ဝေးဝေးနေ.....နင့်ကိစ္စ နင်ရှင်း....."...စသည်ဖြင့်(ရုပ်ရှင်ထဲကလို....မြင်ယောင်ကြည့်ပါအဆွေ)..
သို့နှင့်.......လနတ်သမီးသည်...OG ပေါင်းစုံနှင့် ဖျက်ချပါသော်လဲ...လရင့်ပြီဖြစ်သောကြောင့်......ဒန်တန်ဒန်...
ဆေးဝါးပေါင်းစုံ၏...ဆိုဒ်အဖက်..များကြောင့် ဥ အသွင်ဖြင့် ဖွားလေတော့သည်....
ဥ ပင်လျှင်...၂ လုံးတိုင်အောင်မွေးဖွားပြီး ယခုနေထိုင်ရာ မြေကြီးတွင် ထားခဲ့ပြီး နတ်ပြည်..ပြန်သွားလေသည်။
၄င်း လဥ ၂ လုံးကြောင့်ပင် ကျွနုပ်တို့ လူဖြစ်လာလေသည်.....
ဥမှ ပေါက်လာသော သူငယ်တို့သည်....အထီး..အမ ...မရှိ ပေ။
ဥမှပေါက်ပြီး...ပြုစုသူမရှိသော သူငယ်တို့ကို လောက် ကောင်တို့ တတ်လေတော့သည်။
ထိုလောက်တို့ တတ်သော သူငယ်တို့ထဲတွင် လောက်ကောင် အကိုက်မခံရပဲ...(တနည်း) လောက်ပြီးသူများသည်....
ယောင်္ကျားလေးများ ဖြစ်ကုန်နေတာ့သည်......လောက်ကောင် အကိုက်ခံရ....(တနည်း) လောက်မပြီးသူများသည်...
မိန်းခလေးများ အပျိုကြီးနှင့် အိမ်ထောင်သည် ကွဲထွက်ပုံ...
မိန်းခလေးဖြစ်ကုန်သော...တနည်း..လောက်အကိုက်ခံရသူများတွင်.....လောက် ကြီးသည် မကြီးသည်မူတည်ပြီး
လောက်ကြီး အကိုက်ခံရသူများသည် အပျိုကြီး ဖြစ်ကုန်ပြီး.....
လောက်မကြီး သူများသည်..အိမ်ထောင်သည် ဘဝ သို့ ကူပြောင်းကြတော့သည်.....
Post by: drbolay on August 30, 2014, 02:05:34 AM
သူငယ်ချင်းများကို ဒု-သ-န-သော အကြောင်းလေးပြောပြချင်ပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်ကတော့" ဒုတိယလင်သည် သေသောအခါ နတ်ပြည် ၌ သောတာပန် ဖြစ်ရသည်"တဲ့
Post by: drbolay on August 30, 2014, 02:09:14 AM
၀တ်ရုံတော်က ကြယ်သီးပြုတ်သွားလို့ ကုန်းကောက်တဲဘုရင်ကြီးကို
သတ်တော်ရှည်အမတ်ကြီးက နောက်ကနေ တင်ပါးကို သွားရိုက်လိုက်ပါတယ်။ ဘုရင်ကြီးလည်း
ရှက်သွားပြီး အမတ်ကြီးကို သေဒဏ်ပေးဖို့ပြောလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း
သတ်တော်ရှည်အမတ်ကြီးဖြစ်နေလို့ အကြောင်းရှိရမယ်ဆိုပြီး ဘုရင်ကြီးက ဒီလိုမိန့်ကြားပါတယ်။
"မောင်မင်း ငါ့တင်ပါးကို ဘာကြောင့် ရိုက်သလည်းဆိုတာ အကြောင်းပြချက်ပေးနိုင်ရင်
ဒါနဲ့အမတ်ကြီးကလည်း အားရ၀မ်းသာနဲ့ ပြန်လည်လျှောက်ထားပါတယ်။
"တကယ်တော့ ကျွန်တော်မျိုးကြီးအပြစ်ပါ၊ အရှင်မင်းကြီးကို မိဖုရားကြီးနဲ့မှားသွားလို့ပါ"
Post by: drbolay on August 30, 2014, 02:10:56 AM
"မိန်းကလေးတွေ အင်တာနက်သုံးလာကြတာ ကြိုဆိုတယ်ကွာ"
Post by: drbolay on August 30, 2014, 12:46:43 PM
"ဒါနဲ့မင်းက ဘာရောဂါနဲ့ ဒီကိုရောက်လာတာလဲ"
"အအေးမိပြီး သေလို့ ဒီကိုရောက်လာတာ"
"အင်း.....တနေ့ငါအပြင်ကပြန်လာတော့ အိမ်ထဲမှာ ငါ့မိန်းမက လူစိမ်းတစ်ယောက်နဲ့ ရယ်မောပြောဆိုနေတဲ့အသံကို ကြားရတယ် တံခါးဖွင့်ခိုင်းတာလဲ မဖွင့်ပေးဘူး"
"ဒါနဲ့ငါလဲ တံခါးကိုရိုက်ဖျက်ပြီး အိမ်ထဲဝင်လိုက်တယ်။ အိမ်ထဲမှာရှာတောလည်းမတွေဘုး ငါ(လုံးဝ)မကြေနပ်ဘူး အသံသေသေချာချာကြားရဲ့သားနဲ့ ရှာမတွေတော့ ငါ့မိန်းမကိုထပ်မေးတယ် "ပော့ ငါစကားပြောသံသေသေချာချာကြားတယ် ဘယ်ကကောင်းလည်း"မေးအပြီးမှ မိန်းမက ဘာမှပြန်မပြောတော့ အံ့သြပြီးသေခဲ့ရတာပါအ
သူအံ့သြပြီးသေခဲ့ပုံကိုပြောပြတယ်။ အဲ့ဒိမှ အအေးမိတဲသူက အလျင်စလိုထပြီးပြောတယ်
Post by: drbolay on August 30, 2014, 01:17:52 PM
"နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ကတရားရုံးကိုရောက်တုန်းက ငါမှာလိုက်တယ်မဟုတ်လား။ နောက်တစ်ကြိမ် မင်းမျက်နှာကို ဒီရုံးပေါ်မှ မမြင်ချင်တော့ဘူးလို့"
"ကျွန်တော်လာဖမ်းတဲရဲတွေကို အဲဒီစကားပြောပြခဲ့ပေမယ် သူတို့မယုံကြဘူး တရားသူကြီးမင်း"ရဲ့
Post by: drbolay on August 31, 2014, 02:20:37 AM
"တရားလိုပာာ သူပိုက်ဆံအိပ်ကို အတွင်ခံဘောင်းဘီထဲထည့်ပြီး တွယ်ချိတ်နဲ့ ချိတ်ထားတယ်လို့ဆိုတယ်။ မင်းဘယ်လိုရအောင်ယူခဲ့တာလည်း"
"ပာုတ်ကဲ့တရားသူကြီးမင်း။ ကျွန်တော်ပာာ နည်းတစ်ခုကို ငွေ ၁၀၀ ရမှ သင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်"
Post by: drbolay on August 31, 2014, 12:06:47 PM
လူပြတ်သောနေရာတစ်ခုတွင် ခရီးသည်တစ်ယောက်သည် လုယက်သူတို့နဲ့ရင်ဆိုင်မိလေသည်။
"ကိုင်း-ပါသရွေ့အားလုံးပေးစမ်း။ မပေးရင် မင်းဦးနှောက်ကိုထုတ်ပစ်မယ်"
"ဦးနှောက်ထုတ်ပစ်မယ် ပာုတ်လား။ ထုတ်ပစ်လိုက်လေ။ ဒီခေတ်ကြီးမှာ ဦးနှောက်မရှိလည်းနေလို့ရတယ်။ ငွေမရှိဘဲတော့နေလိုမရဘူး"
Post by: drbolay on August 31, 2014, 12:23:46 PM
"တစ်နဲ့တစ်ပေါင်းရင် နှစ်ရမယ်။ နှစ်နဲ့နှစ်ပေါင်းရင်း လေးရတယ်။ လေးနဲ့လေးပေါင်းရင် အဖြေဘယ်လောက်ရမလဲ ပြောစမ်း"
ဒါတော့ ဆရာ မတရားဘူး။ လွယ်တာကျတော့ ဆရာကဖြေတယ်။ ခက်တာကျတော့ ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်"
Post by: drbolay on September 04, 2014, 01:07:34 AM
Post by: မင်းခေါင် on September 05, 2014, 03:40:27 PM
အမေနဲ့ သမီးတို့ရေကူးကန်မှာ ရေသွားကူးကြတယ်..။ သမီးက ရေကူးဖို့ကန်ထဲ ခုန်ချမလို့လုပ်နေတုန်း
ရေကူး ၀တ်စုံက ချုပ်ရိုးကွဲသွားပါရောဗျာ..။ ဒါနဲ့အမေက ရေကူးကန်ဘေးနားက ဆိုင်းဘုတ်ဗွီနိုင်းကို ယူပြီး
ပတ်ပေးလိုက်တယ်..။ ဆိုင်းဘုတ်မှာ ရေးထားတာက " အန္တရာယ်ရှိသည် ။ အနက် ၂ မီတာ ကျွမ်းကျင်သူ
များသာ " ဆိုတော့ ဘေးနားက လူတွေ ပြုံးစိစိ ဖြစ်ကုန်တယ်..။ ဒါနဲ့ အမေက ဆိုင်းဘုတ်ကို တစ်ဖက်လှည့်ပြီး
ပတ်ပေးလိုက်ပြန်တယ်..။ အဲ့ဒီတစ်ဖက်ကလည်း " အမျိုးသား သီသန့်၊ အထဲ မ၀င်ခင် အ၀တ်အစား ချွတ်ပါ "
ဆိုတာ ဖြစ်နေတယ် ။ ကယောင်ကတန်းနဲ့ အမေက နောက်ထပ် ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုကို ယူလိုက်ပြန်တယ်.။
ဆိုင်းဘုတ်ပေါ်မှာက " ကလေး ၅၀ ၊ လူကြီး ၁၀၀ ၊ အယောက် ၂၀ အထက် အထူးလျော့ဈေး " ဆိုတဲ့
စာကြောင့် လူတွေလည်း ရီကျဲကျဲ ဖြစ်ကုန်တယ်..။ နောက်ဆိုင်းဘုတ် တစ်ခုကို အမေ ထပ်ယူတယ်.။ ဆိုင်းဘုတ်က
စာကို ဖတ်ပြီး အမေ မူးလဲမလို ဖြစ်သွားတယ်..။ " မနက် ၉ နာရီ မှ ည ၁၀ နာရီအထိ အများသုံးနေရာဖြစ်သောကြောင့်
သန့် ရှင်းမှုကို ဦးစားပေးပါ " တဲ့..။ ဒါနဲ့ မဖြစ်ချေဘူး နောက်တစ်ခု ယူမှ ဆိုပြီး ယူလာလိုက်တာ ဖတ်လည်းပြီးရော
အမေ မူးလဲသွားတယ်..။ လူတွေက ၀ါးလုံးကွဲရီတယ်..။ ဆိုင်းဘုတ်ပေါ်မှာ ရေးထားတာက." အမွှေးအမျှင်များ ပိတ်ဆို့ မှု
မဖြစ်စေရန် ၊ နောက်လူများ အသုံးပြုအဆင်ပြေစေရန်..အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း ဦးထုပ်ဆောင်းပါ " တဲ့
Post by: drbolay on September 08, 2014, 02:09:14 AM
Post by: drbolay on September 08, 2014, 02:10:21 AM
Post by: လိပ်ထီး on September 09, 2014, 09:20:48 PM
တစ်ခါတုန်းက တစ်နှစ်ခွဲအရွယ်ကလေး ငယ်လေးရှိတဲ့
တစ်နေ့ညတော့ ယောက်ကျားဖြစ်သူက စိတ်သိပ်လာနေတော့
ထိုးသွင်းပြီးကပ်ထိုးလေးလုပ်နေတော့ သူ့မိန်းကကလေးနို့တိုက်ရင်း ဘေးစောင်းလေး
ခံပေးတာပေါ့ နည်းနည်းအရှိန်ရလာတော့ ကလေးကလည်းအိပ်မပျော်သေးပေမယ့်
မိန်းမလည်းရှေ့နောက်ရမ်းနေတာပေါ့ အဲ့ဒီမှာ ကလေးကမေးတယ်
Post by: drbolay on September 10, 2014, 04:22:53 AM
တောကဆန္ဒန်ဆင် (ဆင် က အင်္ဂါနံဆိုတော့ စ.ဆ.ဇ.ဈ.ည ထဲက ဆ ဖြစ်တဲ့ ကောက်ညင်းဆန် ကိုယူ)
ခြင်္သေသုံးစီးသွင်း (သု က ဗုဒ္ဓပာူးနံဆိုတော့ ယ.ရ.လ.၀ ထဲက ၀ ဖြစ်တဲ့ ၀ါးတစ်လုံးကိုယူ)
ကြွက်နှင့်လုံအောင်ကာ (ထွက်ပေါက် ၀င်ပေါက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာသာပတေးနံဆိုတော့ ပ.ဖ.ဘ.ဗ.မ ထဲက ဖ ဖြစ်
တဲ့ ဖက်ရွက်ကိုယူပြီး အပေါ်ထိပ်နဲ့အောက်ထိပ်ကိုပိတ်လိုက်ပါ)
မြွေနဲ့သတ်လို့ထား (မြွေ က ကြာသာပတေးနံဆိုတော့ ပ.ဖ.ဘ.ဗ.မ ထဲက မ ဖြစ်တဲ့ မီးကိုယူပြီးရှို့လိုက်)
Post by: လိပ်ထီး on September 17, 2014, 05:50:19 PM
တစ်ခါတုန်းက (၄၀) ကျော်မမကြီးတစ်ယောက်နဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးနဲ့
ချစ်ရည်လူးသူတို့ရဲ့ ပထမအစကောင်လေးကလည်း ပညာသိပ်မစုံသေးတော့
မမကြီးကခံလို့ကောင်းပေမယ့် ထစ်ကနဲ ထစ်ကနဲ ခံစားနေရတာနဲ့
Post by: phonex2013 on September 27, 2014, 11:41:16 PM
မေး= မိန်းမနဲ့ ရည်းစားကောင်မလေးနဲ့ ဘာကွာသလဲ
ဖြေ= ခန့်မှန်းခြေ ၄၅ ပေါင်လောက်တော့ ကွာမယ်ထင်တယ် ...
မေး - အိမ်တံခါးမှာ မ်ိန်းမလုပ်သူက အော်ကြီးဟစ်ကျယ်အော်နေမယ်။ ခွေးကလည်း အကြီးအကျယ်ဟောင်နေမယ်
ဆိုရင် ဘယ်သူ့ကို အရင် အိမ်ထဲ အရင်ထည့်မှာလည်း။
ဖြေး- ခွေးကိုထည့်မှာပေါ့ . သူကမှ အိမ်ထဲ ထည့်လိုက်ရင် အသံတိတ်သွားဦးမယ်။
Post by: phonex2013 on September 29, 2014, 08:59:55 PM
တစ်ခါက အမျိုးသမီးတစ်ဦး သေဆုံးသွားပြီးနောက် အသုဘချရာတွေင် အခေါင်းထမ်းသူများကြောင့်
အခေါင်းနှင့် မြေကြီး တိုက်မိသွားရာ အခေါင်းထဲမှ လူသံထွက်လာခဲ့သည် .. တကယ်တမ်းတွေင် အခေါင်းထဲ
ရောက်နေသော အမျိုးသမီးမှာ အံ့သြသင့်စရာ အသက်မသေသေးပဲ ရှိနေသည်ကို တွေ့ရလေသည် ...
ထိုအမျိုးသမီးမှာ နောက် ၁၀ နှစ်ခန့်နေထိုင်သွားခဲ့ပြီးနောက် သေဆုံးသွားလေသည် ...
အခုတစ်ခါ သူမဧ။် အလောင်းကို မြေချရန် အခေါင်းထမ်းသူများ သယ်လာကြပြန်သည် ..
ထိုအခါတွင် သေဆုံးသူအမျိူးသမီးဧ။် ယောက်ျားလုပ်သူက ယခုလို စိုးရိမ်တကြီး သတိပေးလေတော့သည် ..
'' ဟေ့ကောင်တွေ .. ဒီတစ်ခါ ထပ်မတိုက်မိစေနဲ့ကွ '' ဟူသတည်း .......
Post by: မင်းခေါင် on October 17, 2014, 10:17:22 AM
Post by: SnowFlake on November 13, 2014, 08:06:34 AM
အဟွာလေ.. ကွကို ပေါက်ကရ ရေးရတာ နည်းနည်း အားကုန်လာလို့တူများရေးထားတဲ့ ပေါက်ကရလေးတွေ ကူးချလာတာ.. ;D
ကဲ.. စီနီယာ ဂျူနီယာ ဘော်ဒါ အပေါင်း သူတော်ကောင်းတို့ .. :-* :-*
ပေါက်ကျော်မလည်း ဘွဲ့ နှင်းသဘင် တက်ချင်ပါတယ်.. အပေါင်းလေးနှိပ်ပြီး ပို့ ပေးကြပါ.. နော်ဝ်.. :P :P
Post by: dipper111 on December 13, 2014, 10:28:36 PM
Post by: dipper111 on December 13, 2014, 10:42:46 PM
Post by: မင်းခေါင် on January 07, 2015, 12:56:07 PM
Post by: မင်းခေါင် on January 07, 2015, 01:00:57 PM
Post by: မင်းခေါင် on January 07, 2015, 01:04:31 PM
ယူပြီးတော့ တစ်မျိုး.... >:( "
ယူပြီးတော့ ဆိုက်တစ်မျိုး.. ;D ;D "
Post by: မင်းခေါင် on January 17, 2015, 12:54:53 PM
အမျိုးသမီး... " ရတယ်အဖွား..ကြိုက်တာသာ ပေးပါ....သမီးက တို့ စားမှာ..." ;D ;D ;D
Post by: မင်းခေါင် on January 17, 2015, 01:03:06 PM
Post by: မင်းခေါင် on January 17, 2015, 01:25:01 PM
Post by: SnowFlake on January 19, 2015, 07:50:09 AM
သူနဲ့ကျမ သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့နေ့ က အမှတ်တရ လက်ဆောင်တစ်ခု ပေးပါရစေလို့သူပဲပြောတာပါ။ ကာတီယားစိန်တိုက်က သုံးလုံးစီးလေး တစ်ပွင့်တည်းပါတဲ့ မောင်းကွင်း လက်စွပ်လေးတစ်ခုပဲ ကျမပူဆာခဲ့တာ။ ချစ်အဖြေပေးတဲ့နေ့ က ရိုမန်တစ်ဆန်ဆန်လေးဖြစ်ချင်လို့ဘာလီကျွန်းကို ကျမရွေးခဲ့တာ သူ့ အတွက် အမှတ်တရဖြစ်ဘို့ သက်သက်ပါ။
ချစ်သူဘ၀ရဲ့ မနက်ခင်းတွေမှာ မုန့် ဟင်းခါးနှစ်ပွဲထက် ကျမပိုမစားခဲ့ပါဘူး။ ဂျန်းရှင်းစကွဲက ရွေပေါ်မြတင် မုန့် ဟင်းခါးကို ရွေးမိတာတော့အပြစ်မပြောနဲ့ လေ။ ကျမကို ရွှေပေါ်မြတင် ထားပါ့မယ်လို့သူ ကတိပေးထားတာကိုး။
နေ့ လည်ခင်း ကော်ဖီချိန်မှာ ဘာဂါလေး သုံလေးခုလောက် စားတတ်တာကို သူက မျက်လုံးပြူးချင်တယ်။ ရုံးဆင်းလို့အိမ်အပြန်မှာ ကြေးအိုးသောက်ကြတော့ သူမကုန်နိုင်ဘူးဆိုလို့ကျမ ကူစားပေးတာပါ။ ၀ိတ်တက်မှာစိုးလို့ညစာထမင်း မစားတဲ့ ကျမအတွက်တော့ ကြေးအိုး (၂)ပွဲလောက်က ဘာဆန်းသလည်းနော်။
ပိတ်ရက်လေးတွေ ဟိုနားသည်နား သွားဖြစ်ရင် တက်ဆီ စီးတာ မျက်နှာမပျက်နဲ့ လေ။ သူပိုင်ဆိုင်ရမယ့် ကျမ ပစ္စည်းတွေ သူများ ထိတာ၊ တိုးတာ၊ ထောက်တာ မခံချင်လို့ ပဲဟာကို။ စီဒိုးနားမှာ ဂျင်မ် ကစားတာတို့ဆံပင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ် အသားအရေ ထိန်းသိမ်းဘို့အေဗွန်နဲ့ဟဲလ်သီးရှော့ပ် က ကော့စမတ်တစ်တွေ စီးရီးလိုက် ကျမရွေးချယ်တာတို့ .. သူက ငြိုငြင်လာတယ်။ တကယ်က ကျမရဲ့ အလှအပဆိုတာ
သူ ခံစားဘို့ပဲ မဟုတ်ဘူးလား။
စမ်းသပ်မခံတဲ့ သူ့ အချစ်ကို ကျမ ဘယ်လို ယုံကြည်ရပါ့မလည်း။ နောက်ဆုံးတော့ သူ့ ကို ကျမ ကျောခိုင်းလိုက်တယ်။
Post by: မင်းခေါင် on January 30, 2015, 02:38:08 PM
ယောင်္ကျား......" မိန်းမရေ...ငါတို့သားလေးကကြီးလာရင် ဆရာဝန်ဖြစ်မဲ့ဇာတာကွ...."
မိန်းမ.........." ကျမတောင် သတိမထားမိဘူး.. ရှင်က ဘယ်လိုလုပ် သိတာတုန်း.."
ယောင်္ကျား...." သိတာပေ့ါဟ..ငါ့သားက မိန်းမတစ်ယောက်ကို မြင်ရင် နားကြပ်ထောက်တဲ့နေရာနဲ့ ဆေးထိုးမဲ့နေရာကို အရင်ဆုံး
တန်းကြည့်တာ..အဲ့ဒါ ဆရာဝန် ဖြစ်မဲ့ဇာတာပေါ့ကွ..."
Post by: မင်းခေါင် on January 30, 2015, 02:42:16 PM
အိမ်ထောင်ကျစ ယောင်္ကျားက သူ့ မိန်းမကို မေးလိုက်တယ်...။
" ချစ်....ကိုယ်နဲ့ မယူခင်တုန်းက ရည်းစားဘယ်နှစ်ယောက် ထားခဲ့ဘူးလဲ...? "
ငါးမိနစ်လောက်ကြာတဲ့အထိ သူ့ မိန်းမက အသံတိတ်နေတာကြောင့် ယောင်္ကျားဖြစ်သူက ထပ်မေးလိုက်တယ်..။
" ကိုယ်မေးတာ မဖြေပဲနဲ့ဘာလို့ ငြိမ်နေရတာလဲ ချစ်...."
" နေစမ်းပါဦးရှင်..တော်လုပ်တာနဲ့အစကနေ ပြန်ရေရတော့မယ်..." ;D ;D ;D
Post by: မင်းခေါင် on February 05, 2015, 12:51:06 PM
" မီး ဘ၀မှာ ဒါဟာ မီးအတွက် ပထမဆုံးပါပဲရှင်.....ခုထိ ကြောက်နေတုန်းမို့ .ဖြစ်နိုင်ရင်
" အား...............ဒီမှာ သေတော့မယ်...အရမ်း မလုပ်ပါနဲ့ ..."
" ရှင့်ဟာက အကြီးကြီးပဲရှင့်....ကျမထဲကို အတင်းတိုးဝင်နေတာ...."
" အမေရေ...မီးကို ကယ်ပါဦး..ဒီမှာ..သွေးတွေ...သွေးတွေ..ထွက်ကုန်ပြီ..."
ဒီမှာ ကလေးမ သွေးလှူတာပဲ ဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့...အော်မနေနဲ
့ " ;D ;D ;D ;D
Post by: မင်းခေါင် on February 26, 2015, 10:46:00 AM
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်နေတုန်း မောင်မင်းခေါင်ရဲ့ ဖုန်းက မြည်လာတယ်..။
မိန်းခလေး.. " ကိုကိုလား..နိုနိုပါ...ချစ်လေး အခု ပွဲစားတန်းရောက်ပြီး. ကိုမော်ကြီးတို့ နဲ့ တွေ့ နေတာ..၊ အဲ့ဒါ ချစ်လေးစီးနေတဲ့ကားကို ကာဒီးနားနဲ့ 
လဲမလားတဲ့...အလိုက် ၂၀၀ ပေးရမယ်တဲ့..လဲလိုက်မယ်နော်ကိုကို.."
မိန်းခလေး.." ဟယ်...တကယ်.ကိုကိုက အရမ်းချစ်ဖို့ ကောင်းတာပဲ....ပြီးတော့လေ..ပြောရဦးမယ်..မနက်ကလေ..ကိုကိုထွက်သွားပြီးတော့မှ ဒေါ်ဒေါ်
ကြည် ရောက်လာပြီး စိန်လက်စွပ်တကွင်း လာပြတယ် ကိုကိုရဲ့ ...ဈေးကလည်း ၈၀ ထဲဆိုတော့ တန်လွန်းလို့ ဝယ်ထားလိုက်မိတယ်...
မိန်းခလေး.." ဟီး..ဒါကြောင့် ကိုကို့ ကို ချစ်တာ..၊ ပြီးတော့လေ..အခု ဆန်းဒေးကျရင် ဒေစီတို့မင်္ဂလာဆောင် သွားရဦးမှာ ကိုကိုရဲ့ ..အဲ့ဒါ ဗိုလ်ချုပ်ဈေး
၀င်ပြီး နည်းနည်းဝယ်မလို့ ..ကိုကို့ ဘီဒိုထဲက ၁၀ လောက်ဆွဲလာခဲ့သေးတယ်..သုံးလိုက်မယ်နော် ကိုကို....."
မိန်းခလေး.." ဟယ်...ဒီနေ့ကိုကို အရမ်းသဘောတွေ ကောင်းနေပါလား...ခါတိုင်းများ ဒီလောက်ဆို ဘီလူးဆိုင်း တီးနေပြီ...ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်လေ..ချစ်လေးတော့
လိုချင်တာတွေရလို့ပျော်တယ်.....ဒါဘဲနော် ကိုကို....အာဘွားစ်..."
ဖုန်းချသွားသောအခါမှ ဘေးနားက သူငယ်ချင်းက မောင်မင်းခေါင်ကို လှမ်းမေးသည် ။
သူငယ်ချင်း.." မျက်နှာက ပြုံးစိစိနဲ့ ...ဘယ်က ဖုန်းလဲဗျ..."
မင်းခေါင်...." သိဘူးဗျ...ဖုန်းမှားဝင်လာတာ..." ;D ;D ;D ;D
Post by: မင်းခေါင် on March 05, 2015, 01:13:03 PM
online မှာ ရည်းစားဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်ပြုမယ် လုပ်တော့..ကောင်မလေးက ပြောတယ်..
" မောင်....မောင့်ကို ကျမ ၀န်ခံစရာတစ်ခုရှိတယ်..မောင် စိတ်မဆိုးရဘူးနော်..."
" ဘာဖြစ်လို့ လဲ ချစ်ရဲ့ .."
" အမှန်မှန်တော့လေ..ကျမမှာ..ရင်သား မရှိဘူးမောင်ရဲ့ ..."
" အိမ်ထောင်ရေးမှ ရင်သားမရှိလဲ ပြဿ နာ မရှိပါဘူးကွယ်.. မောင်တို့နှစ်ယောက် နားလည်မှုရှိဘို့အဓိကပါပဲ..
မောင်လဲ ချစ်ကို ၀န်ခံစရာ တစ်ခုရှိတယ် ချစ်ရဲ့ ..."
" မောင့် တန်ဆာကလေ မွေးကင်းစ ကလေးအတိုင်းပဲ..အဲ့ဒါကြိုပြီး ၀န်ခံထားချင်လို့ ..."
" ဒါလဲ အရေးမကြီးပါဘူးမောင်ရယ်...ကျမတို့နားလည်မှု ရှိရင် ပြီးတာပါပဲ..."
မင်္ဂလာဦးညရောက်တော့ ကောင်မလေးက အကျီ င်္ အ၀တ်အစားတွေ ချွတ်လိုက်တယ်...သူမ ပြောထားသလိုပဲ ရင်သားကမရှိဘူး.
ပြားကပ်နေတာပဲ...။ ကောင်လေးကလည်း အ၀တ်အစားတွေ ချွတ်လိုက်တယ်..။ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီချွတ်လိုက်တော့ ကောင်မလေး
မေ့လဲ သွားပါရော...။ သတိပြန်ရတဲ့အချိန် တုန်တုန်ရီရီနဲ့ ပြောရှာတယ်..။.
" မောင် ပြောတော့ မွေးကင်းစ ကလေးလိုပဲဆို..."
" အင်းလေ...မွေးကင်းစ ကလေးလိုပဲ..အရပ်က ၂၁ လက်မ..အလေးချိန်က ၅ ပေါင် ၈ အောင်စလေ..."
Post by: မင်းခေါင် on March 07, 2015, 12:44:41 PM
အသက် ( ၁၆ ) နှစ်.......ယူမဲ့ယောင်္ကျားက အသက်ငယ်ရမယ်...၊ ရုပ်ချောရမယ်...၊ ပိုက်ဆံချမ်းသာရမယ်..၊ လူပျို ဖြစ်ရမယ်..။
အသက် ( ၂၀ ) နှစ်...... အသက်မငယ်ရင်နေပါစေ..၊ ရုပ်ချောမယ်.၊ ပိုက်ဆံရှိပြီး လူပျိုဖြစ်ရင် ရပြီ...။
အသက် ( ၂၅ ) နှစ်......အို...အသက်မငယ်..ရုပ်မချောလည်း ရတယ်..၊ ချမ်းသာပြီး လူပျို ဖြစ်ရင် ပြီးတာပဲ..။
အသက် ( ၃၀ ) နှစ်......အသက်မငယ် ရုပ်မချောလည်းရတယ်..မချမ်းသာလည်းနေပါစေ..လူပျိုဖြစ်ရင် ပြီးတာပဲ...။
အသက် ( ၃၅ ) နှစ်......ဘာပဲ ဖြစ်နေနေ...ယောင်္ကျားဆိုရင် ပြီးတာပဲ.... ;D ;D ;D ;D
အဲ့လိုနဲ့ ပဲ..အန်တီနှင်းတစ်ယောက် အပျိုကြီး ဖြစ်တော့မှာ...ခိခိ
Post by: မင်းခေါင် on March 07, 2015, 12:47:25 PM
တခါက ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြော ဆရာဝန်ကြီးဆီသို့ အမျိုးသမီး လူနာ တဦး ဆေးခန်း လာပြသည်။ ဆရာဝန်ကြီးက ရာဘာလက်အိတ်ကို လက်မှာစွပ်ပီး လူနာကို ကြည့်လိုက်ရင်းက နောက်ပြောင်လိုသည့် သဘောဖြင့် ..
ဆရာဝန်ကြီး စကားဆုံးပီးအတော်ကြာတဲ့အထိ လူနာအမျိုးသမီးက ငြိမ်နေပီးတော့မှ ရုတ်တရတ် ခွီးခနဲ ထရီတယ်....
လူနာအမျိုးသမီး " မဟုတ်ပါဘူး ဆရာရယ်.၊ ဆရာပြောတာနဲ့ ဆက်စပ်ပီး ကွန်ဒုံးကို ဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတာကိုပါ တွေးမိလို့ပါ.."
( မှတ်ချက် ။ ။ အမျိုးသမီးများဟာ ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဦးနှောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာလေး ပြောပြချင်လို့ပါ..)
Post by: မင်းခေါင် on March 07, 2015, 01:00:16 PM
သူငယ်ချင်း လေးဦးဟာ တောထဲကို အပျော်ခရီးထွက်ဖို့ ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာ တိုင်ပင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ခရီးမထွက်ခင် နှစ်ရက်အလိုမှာတော့ အဖွဲ့သားတစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ရော့တ်ရဲ့ဇနီးဟာ ခင်ပွန်းသည်ကိုခရီးမလွှတ်တော့ဖို့ ရုတ်တရက် ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်ပါတယ်။
ရော့တ် မလိုက်နိုင်တော့တာကြောင့် သူ့သူငယ်ချင်းတွေဟာ စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြပေမယ့် သူတို့အနေနဲ့ ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်တာမို့ သုံးယောက်ပဲသွားဖို့
ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ခရီးထွက်လို့ စခန်းချမယ့်နေရာကို ကျန်တဲ့ သုံးဦး ရောက်သွားတဲ့ အခါမှာတော့ ရွက်ဖျင်တဲထိုးပြီး ဖိုထားတဲ့မီးဖိုနဲ့
ညစာချက်နေတဲ့ ရော့တ်ကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
"ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ရော့တ်ရေ။ ဒီကို ဘယ်အချိန်ကတည်းက ရောက်နေတာလဲ။ဒီကို လာခွင့်ရအောင် မင်းမိန်းမကို ဘယ်လို ပြောလိုက်တာလဲကွ"လို့
"မနေ့ကတည်းက ရောက်နေတာကွ။ မနေ့က ညနေပိုင်းမှာ ကုလားထိုင်မှာ ထိုင်နေတုန်း ငါ့နောက်ကို မိန်းမ ရောက်လာပြီး ငါ့မျက်လုံးကို ပိတ်လိုက်တယ်ကွ။ ပြီးတော့ ဘယ်သူလဲ.. ခန့်မှန်းကြည့်' လို့ မေးတယ်ကွ"လို့ ရော့တ်က ပြောလိုက်ပါတယ်။
"သူ့လက်ကို ဖယ်ကြည့်လိုက်တော့ ထိုးဖောက်ပြီးမြင်ရတဲ့ ည၀တ်အင်္ကျီဝတ်ထားတယ်ကွ။ အဲဒါနဲ့ ငါ့ကို အိပ်ခန်းထဲ ဆွဲခေါ်သွားတယ်။ အခန်းထဲမှာ ဖယောင်းတိုင်တွေ ထွန်းထားပြီးနှင်းဆီပွင့်ဖတ်တွေကိုလည်း ဖြန့်ခင်းထားသေးတယ်။
"ခုတင်ပေါ်မှာတော့ လက်ထိတ်နဲ့ ကြိုးတွေ တင်ထားတယ်ကွ။ သူ့ကို ခုတင်ပေါ်မှာ ကြိုးနဲ့ တုပ်ပြီး လက်ထိတ်ခတ်ဖို့ ငါ့ကို ပြောတယ်ကွ။ သူပြောတဲ့အတိုင်း ငါလုပ်ပြီးတော့ 'ခုချိန်ကစပြီး ရှင်လုပ်ချင်ရာ လုပ်တော့'လို့ ပြောတာနဲ့ ခုဒီစခန်းမှာ ငါရောက်နေတာပေါ့ကွာ" ;D ;D ;D
Post by: tunaye2011 on March 07, 2015, 01:10:05 PM
ကိုရီးပြူးက ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာ၊ နယ်ဘက်မှာ တံတားဆောက်ဖို့ တာဝန်ကျတယ်။ သူ့မိန်းမက ကျောင်းဆရာမ၊ မြို့ပေါ်မှာ တာဝန်ကျတယ်။
ဒီတော့ မိန်းမလုပ်သူက ယောက်ျားတာဝန်ကျရာကို လိုက်နေလို့ မရဘူး။သီတင်းကျွတ်မှာ ကျောင်းက တပတ်ပိတ်တော့ ကိုရီးပြူး ရှိရာကို သူ့မိန်းမ
လိုက်လာတယ်။ ကျန်တာက ပြသနာမရှိပေမယ့် အိမ်ဖော်ကောင်မလေး ခေါ်ထားတာက ပြသနာဖြစ်နေတယ်။
‘ရှင့် အိမ်ဖော်ကလဲ ချောလှချည်လား ကိုရီးပြူးရဲ့’
ဒီလိုနဲ့ ကျောင်း ပြန်ဖွင့်တော့ သူ့မိန်းမလည်း ပြန်သွားတယ်။နှစ်ရက်၊ သုံးရက်နေတော့ အိမ်ဖော်လေးက သတင်းပို့တယ်။ ဟင်းချက်တဲ့ ဒယ်အိုးကြီး ပျောက်နေတယ်တဲ့။ ဆရာမ ပြန်သွားကတည်းက ပျောက်တာ၊ မှားများပါသွားလေသလား မေးကြည့်ပါအုံး ဆိုတော့….ကိုရီးပြူး လည်း သူ့မိန်းမဆီ စာရေးပြီး မေးရတာပေါ့… …
‘မိန်းမရေ…မင်းယူတယ်လို့ မစွပ်စွဲပါဘူး မင်းပြန်သွားကတည်းက ဒယ်အိုးကြီး ပျောက်နေလို့’
‘ယောက်ျားရေ…ရှင်တို့ အတူအိပ်တယ်လို့ မစွပ်စွဲပါဘူး သူသာ သူ့အိပ်ယာမှာ သူအိပ်ရင် ဒယ်အိုးကို ပြန်တွေ့တာ ကြာပြီ၊
တိန်... ;D ;D ;D ;D ;D
Post by: မင်းခေါင် on March 16, 2015, 03:35:36 PM
နေ့ မအား ညမနား
ဆေးခန်းသို့အမျိုးသမီး တစ်ယောက် ရောက်လာသည် ။
" ကျွန်မ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်က အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆရာ...အခုမှ ဟန်းနီးမွန်းက ပြန်ရောက်တာပါ.."
" ပြောပါ...ပြောပါ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စဆိုတာ ရှက်နေစရာ မလိုပါဘူး.."
" ကျွန်မ သိချင်တာကလေ...ယောင်္ကျားတွေ ဘယ်အချိန် အိပ်ကြလဲ ဆရာ.."
Post by: မင်းခေါင် on March 16, 2015, 03:51:02 PM
" မီးသွေး. ". ;D ;D ;D ;D ;D
Post by: မင်းခေါင် on March 16, 2015, 04:17:45 PM
Post by: မင်းခေါင် on March 19, 2015, 02:37:31 PM
တတိယနှစ်... ကျနော်တို့ လင်မယားနှစ်ယောက် ပြောသမျှကို ရပ်ကွက်လူကြီးက နားထောင်ရတယ်..။ ;D ;D ;D ;D
Post by: mgbanana on March 22, 2015, 09:40:14 PM
Post by: mgbanana on March 22, 2015, 11:56:46 PM
Post by: SnowFlake on April 01, 2015, 10:57:59 PM
အိုင်ဆေး ကိုမင်းခေါင်.. အလှည့်ကျတော့ မနွဲ့ကြေးးး.. နော့ :P
Post by: မင်းခေါင် on May 25, 2015, 10:43:46 AM
Post by: မင်းခေါင် on May 25, 2015, 10:53:14 AM
Post by: မင်းခေါင် on May 25, 2015, 12:22:10 PM
Post by: mgbanana on May 25, 2015, 03:27:20 PM
Post by: SnowFlake on June 05, 2015, 03:20:00 PM
Post by: မင်းခေါင် on July 27, 2015, 10:24:40 AM
Post by: မင်းခေါင် on July 29, 2015, 11:38:16 AM
" သမီး ဒီလောက် မအ ပါဘူးမေမေရဲ့ .. အတွင်းခံကို သူမမြင်အောင် ချွတ်ထားပြီးမှ ဒါန်းစီးတာပါ.." ;D ;D ;D
Post by: မင်းခေါင် on August 20, 2015, 09:39:52 AM
Post by: မင်းခေါင် on August 20, 2015, 09:45:49 AM
Post by: မင်းခေါင် on September 11, 2015, 03:23:37 PM
ဒါနဲ့ ..အိမ်ကအထွက် ခြံအပြင်ရောက်တာနဲ့သမီးအလိမ်မာလေးက ခါးက ခါးပတ်ကိုဖြုတ်ပြီး ဒူးခေါင်းမှာ ပတ်လိုက်တော့တယ်.. ???
Post by: မင်းခေါင် on September 11, 2015, 03:30:03 PM
ကိုကို့ ရဲ့ ချစ်လေး....." ;D ;D ;D ;D
Post by: Chit Min Maw on September 12, 2015, 06:28:24 AM
ဖတ်ဖတ်ကိုမောလို့ ... အလုံးကြီး ဆို့နေသလိုပဲ။ :) :D ;D
Post by: SnowFlake on September 16, 2015, 01:38:40 PM
ကျမက သွားတိုက်ဆေးပါ မောင်.. :P
Post by: နိုးတူး on October 04, 2015, 12:10:14 PM
အဲဒီလူ ဖြုံသွားတယ်။ နောက် မစရဲတော့ဘူး။ ;) ;) ;) ;) ;)
Post by: မင်းခေါင် on October 10, 2015, 11:07:47 AM
မှတ်ကရော.. ;D ;D
Post by: မင်းခေါင် on October 10, 2015, 12:20:12 PM
Post by: မင်းခေါင် on October 10, 2015, 12:25:58 PM
" မှားတယ်...နောက်တခေါက် ဆက်လုပ်..." ;D ;D ;D ;D
Post by: phyokyaw on October 29, 2015, 01:32:46 AM
Post by: မင်းခေါင် on October 30, 2015, 03:58:22 PM
Post by: မင်းခေါင် on November 28, 2015, 09:58:45 AM
မိုမို ။ ငင်..တကယ်လားဦး..အဲ့ကောင် သေပြီသာ မှတ်...... ;D ;D ;D
Post by: မင်းခေါင် on January 21, 2016, 01:09:11 PM
Post by: lover08 on February 15, 2016, 09:37:23 PM
Post by: နတ်ဆိုးကြီး on August 05, 2016, 01:20:06 PM
အတိုင်ပင်ခံကြီး ဝင်လာတော့ မိဖုရားကြီးရဲ့ Sexy Post ကို မြင်သွားတာပေါ့.. :-[ :-[ :-[
ဇွန်ကြီးလောက်နီးနီး Post ပေးကောင်းတဲ့ မိဖုရားကြီး အလှကိုမြင်ပြီး ညီလာခံ မတတ်နိုင်တော့ပဲ အိမ်ကို ပြန်ပြေး Hand play ဆွဲရတော့တာပေါ့... :D :D :D
အင်း မိဖုရားကြီးလဲ ခါးမှာပဲ အိမ်ကဟာမကြီးလဲ ခါးမှာပဲ ဆိုပြီး မိဖုရားကြီးတိုက်တဲ့ ဆီဒိုရာ အစွမ်းနဲ့ အိမ်ကဟာကြီးပဲ အတိုးချ ဝုန်းတော့တာပေါ့.. မိဖုရာကို ဝုန်းမိရင် အရှော့ခံရမှာကိုး.... :P :P :P
အံသြလောက်ပါသည်။ မိဖုရားယူသွားသော အရာနှင့် သင်စိတ်ကူးထားသော အရာ တထပ်တည်းကျနေပါသည်။ :P :P :P
Post by: zinzin1996 on August 13, 2016, 12:52:14 AM
Post by: tunaye2011 on September 21, 2017, 10:10:33 AM
Post by: waiyanlin75 on December 03, 2017, 11:47:50 AM